ဆယ်ကျော်သက် – Grab Love Story
တရုတ်ကပြားမလေး ဖြစ်သော်လည်း မျက်လုံးမမှေး၊ မျက်ဝန်းကြည်ကြည်၊ မျက်တောင်ရှည်ရှည် ကော့ကော့များနှင့် ဖြောင့်စင်းပေါ်လွင်သော နှာတံလေးလည်း ရှိပြန်ရာ အပျိုပေါက်အရွယ်ကလေးမှာပင် လှသွေးတွေ ကြွယ်၍နေတော့သည်..။ ပန်းအိဖြူသည် ခေတ်မှီ အဝတ်အစား လှလှပပ ဒီဇိုင်း ခပ်မိုက်မိုက် ခပ်ဆန်းဆန်း များကို သဘောကျသည်..။ သူမ၏ မိဘများကလည်း ပန်းအိဖြူကို ကလေးတစ်ယောက်ဟု သဘောထားကြသေးသောကြောင့် ဖော်ဖော်လှစ်လှစ် ရှိသော ခပ်ဟော့ဟော့ အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်နေခြင်းကို တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်း မပြုကြ..။ သည်အတိုင်းပင် ကြည့်နေကြသည်..။ ပန်းအိဖြူမှာလည်း ကလေးစိတ် မပျောက်တပျောက်၊ အပျိုကလည်း မဖြစ်တဖြစ်မို့ ဖော်ဖော်လှစ်လှစ် ဖြစ်နေတာတွေကို အရေးမစိုက်..။ နားမလည်၊ သူမ၏ စိတ်ထဲတွင် လှသည်၊ ဆန်းသည် ၊ ခေတ်မှီသည် ထင်သည့် အဝတ်အထည်များကို စိတ်ကြိုက် ဝယ်ယူ ဝတ်ဆင်နေလေသည်..။ ပန်းအိဖြူက ထိုသို့ ခပ်ဟော့ဟော့ အဝတ်အစားများကို ခပ်မိုက်မိုက် ဝတ်ဆင်နေမွုကြောင့် ကြားထဲမှ စိတ်လွုပ်ရှားကာ အနေရခက်နေသူမှာ စိုးခိုင်ကျော် ဖြစ်သည်..။ သည်နေရာတွင် စိုးခိုင်ကျော်နှင့် ပန်းအိဖြူတို့ မိသားစု၏ အခြေအနေကို ဖော်ပြထားဖို့ လိုအပ်လာသည်..။ စိုးခိုင်ကျော်က အညာသား ။ အညာသားမှ မြို့ပေါ်ကပင် မဟုတ်..။ မန်းမန်း ရေဝေး…ဟု အညာသား အချင်းချင်းပင် လှောင်ပြောင်တတ်ကြသည့် မြစ်ဝေးချောင်းဝေး ၊ ကျေးတောရွာသားဖြစ်သည်..။ ဉာဏ်လေးကောင်းပြီး စာပေဝါသနာ ပါသူဖြစ်လေရာ၊ ရွာဦးကျောင်း ဘုန်းကြီး၏ ကူညီစောင်မမွုဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် နေထိုင်ကာ ၊ စာသင်ကြားနိုင်ခဲ့ကာ ဆယ်တန်းအောင်ရုံမက ဘွဲ့တစ်ခုပင် ရလျှက် ရုံးတစ်ရုံးတွင် အလုပ်ဝင်လုပ်နေပေသည်..။
လွန်ခဲ့သည့် ငါးနှစ်ခန့်က ကုသိုလ်ကံ ထောက်မကာ သိန်း(၅၀) ထီပေါက်လေရာ၊ ဆင်ခြေဖုန်း ရပ်ကွက်တစ်ခုတွင် (၄၀)ပေ x (၆၀)ပေ မြေကွက်နှင့် တကွ၊ သုံးပင်နှစ်ခန်း ပျဉ်ထောင်အိမ်လေး တစ်လုံးကို ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့သည်..။ အညာရှိ မိဘများကို ရန်ကုန်သို့ ပြောင်းရွေ့ နေထိုင်ရန် ခေါ်လာခဲ့သည်..။ သို့သော် ကျေးတောရွာသား သူ့မိဘများသည် ဇာတိကို အလွန်ခင်တွယ်သည့်အပြင်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် နေရထိုင်ရသည်ကို အသက်ရွူကြပ်သည်ဟု မနေလိုကြပဲ၊ တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်သာ နေလျှက် ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာ ပြန်သွားကြသည်..။ လက်ထဲတွင် ကျန်နေသေးသော ငွေများမှ (၅) သိန်း ကန်တော့လိုက်ရာ၊ စိုးခိုင်ကျော်၏ မိဘများလည်း ရွာတွင် လယ်ပိုင်ယာပိုင်နှင့် အခြေခိုင်သွားကြသည်..။ စိုးခိုင်ကျော်မှာတော့၊ ရန်ကုန်တွင် သူတစ်ယောက်တည်း အိမ်တစ်လုံးနှင့် ယောင်ချာချာ ဖြစ်ကျန်ခဲ့သည်..။ သူ့မိတ်ဆွေအချို့က မိန်းမယူရန် တိုက်တွန်းကြသည်..။ စိုးခိုင်ကျော်သည် တောသားဖြစ်သော်လည်း ရန်ကုန်ရောက်သည်က ကြာနေပြီဖြစ်သည့်အပြင်၊ မိန်းမမွုကိစ္စတွင်လည်း သိကောင်းသည်ဟု ဆိုရလောက်အောင် သူ့အလိုကျ လိုးနေဆော်နေနိုင် အဆက်တွေ ရှိနေသည်..။ သည်တော့ သူ့အနေဖြင့် အတည်တကျ အိမ်ထောင်ပြုလိုစိတ် မရှိ..။ အိမ်မှာ အငှားတင်ထားရလျှင် ကောင်းမလားဟု စိတ်ကူးနေချိန်တွင် အဆင်သင့်သွားကာ ပန်းအိဖြူတို့ မိသားစု စိုးခိုင်ကျော်၏ အိမ်တွင် လာငှားနေထိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်..။ သုံးပင်နှစ်ခန်း အိမ်ကို အလယ်မှ သုံးထပ်သား နံရံ ကာရံပေးလျှက်၊ တစ်ဘက်ခြမ်းကို တစ်လ (၁၀၀၀) ကျပ်နှင့် တစ်နှစ် ငှါးထားခဲ့သည်..။ ပန်းအိဖြူ၏ မိခင် အေးအေးမော်က စိုးခိုင်ကျော်နှင့် တစ်ရုံးတည်း..။ ဌာနချင်းတော့ မတူ။ ပန်းအိဖြူ၏ ဖခင် ကိုတုတ်ဖြူကတော့ တရုတ်တန်းတွင် ဆိုင်ခန်းဖွင့်ကာ အရောင်းအဝယ်လုပ်သည်..။ စိုးခိုင်ကျော်တို့ အိမ်သို့ ငှားနေပြီးသည့် နောက်တွင် အေးအေးမော် ရာထူးတက်သလို၊ ကိုတုန်ဖြူ၏ အရောင်းအဝယ်လည်း တိုးတက်ကြီးပွားလျှက် စီးပွားတက်ကောင်းသည်ဟု ယူဆကြကာ စီးပွားတက်လာသော်လည်း အခြားသို့ မပြောင်းကြတော့..။
စိုးခိုင်ကျော်၏ အိမ်မှာပင် ဆက်၍ငှားနေခဲ့ကြသည်..။ စိုးခိုင်ကျော်၏ အိမ်က အထပ်ခိုးလည်းပါသည့်အတွက် ကိုတုတ်ဖြူနှင့် မအေးအေးမော်တို့ မိသားစု နေထိုင်၍ အဆင်ပြေသည်..။ ခြံဝင်းလည်း အတော်အသင့် ကျယ်ဝန်းရာ ၊ ပန်းပင်စိုက် ဝါသနာပါသည့် ကိုတုန်ဖြူတို့ လင်မယားအတွက်လည်း ဟန်ကျသလို ရှိနေသည်..။ သိန်း(၅၀) ထီ မပေါက်ခင်က စိုးခိုင်ကျော်သည် ကျူရှင်လည်း ပြခဲ့ဖူးရာ၊ ပန်းအိဖြူ (၁၀) နှစ်သမီး အရွယ် ငါးတန်း ကျောင်းသူ ဘဝကပင် စကာ စိုးခိုင်ကျော်ထံ စာမေးဘာမေး လုပ်ခဲ့ရာ ပန်းအိဖြူအတွက် သီးသန့် ကိုယ်ပိုင် ကျူရှင်ပြပေးသည်အထိ ရှိလာခဲ့သည်..။ ယခု ရှစ်တန်း ရောက်နေပြီ ဖြစ်သော ပန်းအိဖြူကို စနေ ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် မနက်ပိုင်း တစ်ပိုင်းလုံးလိုလို စာပြပေးနေသည်..။ ကြားရက်များတွင်မူ ပန်းအိဖြူက စာမရလျှင် စိုးခိုင်ကျော်ထံ စာလာမေးတတ်သည်..။ ဤအိမ်တွင် ငှားနေမိ၍ စီးပွားတက်လာသည်ဟု ယုံကြည်နေကြသော အေးအေးမော်တို့က စိုးခိုင်ကျော်အတွက် မကြာခဏပင် ဟင်းများ ပို့ပေးတတ်ကြသည်..။ အိမ်ရှင်နှင့် အိမ်ငှား ဆိုသော်လည်း မိသားစုလို ဖြစ်နေကြသည်..။ အိမ်ခန်းတစ်ဘက်ခြမ်းနှင့် တစ်ဘက် ကူးလူး သွားလာနေကြသည်..။ ရင်းရင်းနှီးနှီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆက်ဆံကြသည်..။ သည်နေ့လည်း တနင်္ဂနွေနေ့မို့ စိုးခိုင်ကျော်က ပန်းအိဖြူကို စာပြပေးနေသည်..။ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် ကိုတုတ်ဖြူနှင့် အေးအေးမော်တို့သည် ဈေးသို့ လင်မယား စုံတွဲ သွားလေ့ရှိကြသည်..။ ဈေးတွင် အစားအသောက်များ ၊ အတူတူဝယ်စားကြကာ၊ တစ်ပတ်စာ ဟင်းရံ ပစ္စည်းများ ဝယ်လေ့ရှိကြသည်..။ ယခုလည်း သူတို့ ဈေးဝယ်သွားနေကြရာ၊ အိမ်တွင် စိုးခိုင်ကျော်နှင့် ပန်းအိဖြူတို့နှစ်ယောက်တည်း ရှိနေကြသည်..။ သည်နေ့တွင် ပန်းအိဖြူ ဝတ်လာသည်မှာ ခါတိုင်းထက်ပို၍ ဟော့သည်..။ ပို၍လည်း ဖော်ဖော်လှစ်လှစ် ရှိသည်..။ သည်တော့ စိုးခိုင်ကျော်မှာလည်း ခါတိုင်းထက်ပို၍ စိတ်လွုပ်ရှားရသည်..။ မရိုးမရွ ဖြစ်ရသည်..။ ပန်းအိဖြူ ဝတ်စားထားပုံကို ကြည့်ပါအုန်း…။
အပေါ်ပိုင်းတွင် ဝတ်ထားသည်က အင်္ကျီဟု ခေါ်ရမည်ထက် ရင်ဝတ်လွာဟု ခေါ်လျှင်ပိုသင့်မည့် အဝတ်ဖြစ်သည်..။ ရင်ညွန့်တွင် ပတ်စည်းထားကာ ခါးသာသာအထိ ရှည်သည်..။ ပခုံးသိုင်းကြိုးများ ပါသော်လည်း လက်သန်းလုံး၏ တစ်ဝက်သာသာမျှသာ ဖြစ်သည်..။ သည်တော့ ရင်ညွန့်အထက်ပိုင်း ပခုံးလုံးလုံးဝန်းဝန်းလေးများ၊ ချိုင်းများ၊ အကုန် အဖွေးသား ပေါ်၍ နေသည်..။ ရင်ညွန့်အောက်ပိုင်းမှ ခါးအထိ တော့ ဖုံးဖုံးသာသာ ရှိနေသည်..။ သို့သော် ကိုယ်တွင်ကပ်ကာနေသော အဝတ်အစားမျိုးဖြစ်လေရာ ဆူဖြိုးစ အပျိုပေါက်မလေး၏ ကိုယ်လုံးကောက်ကြောင်းကတော့ ကောင်းကောင်းကြီး ပေါ်လွင်နေသည်..။ ချာတိတ်မလေးသည် အတွင်းခံ တစ်စုံတစ်ရာလည်း ဝတ်မထား၊ ရင်ခံဝတ်စုံလေး တစ်ထည်သာ ဝတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်..။ ကိုယ်တွင် ကပ်နေသလို ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် ရှိသော ထိုအဝတ်ကြောင့် ငုံဖူးစ ရွေရင်အုံ မို့မို့လေးများ၏ အသွင်က ဖုဖုဖောင်းဖောင်းလေး ပေါ်နေသည်..။ အသက် (….) နှစ်ကျော်ကျော် အပျိုမဖြစ်တဖြစ် မိန်းကလေးမို့ ရင်သားတို့က မို့ဝန်းဆူဖြိုးခြင်းတော့ မရှိသေးပါ..။ နို့စူစ ခပ်မို့မို့လေးသာ ဖြစ်သည်..။ နုထွတ်သော ရင်သားစုကလေးများ၏ အသွင်သည် စိုးခိုင်ကျော်ကို စိတ်ဂယောက်ဂယက် ဖြစ်အောင်ပင် ဖမ်းစားနေကြသည်..။ ဟော… စာကြည့်စားပွဲက တစ်ယောက်စာ ခပ်သေးသေးလေး ဖြစ်ကာ နှစ်ယောက်သား ဓါးလွယ်ခုတ် အနေအထားဖြင့် ထိုင်နေကြရာ ၊ စိုးခိုင်ကျော်မှာ ပန်းအိဖြူ၏ ရင်သားနုနု ဖူးငုံလေးများ၏ ဖုဖုဖောင်းဖောင်း ဖြစ်နေပုံကို အနီးကပ် သေသေချာချာကို မြင်နေရသလို ရှိနေသည်..။ အောက်ပိုင်းတွင် ဟော့ပင်ခေါ် ဘောင်းဘီတို ကြပ်ကလေးကို ဝတ်ထားသည်..။ ထိုဘောင်းဘီလေးသည် လုံးဝန်းကျစ်လျစ်သော တင်ပါးသားကို ဖုံးရုံမျှသာ ရှိသည်..။ ဘောင်းဘီ အဖျားသည် တင်ပါး၏ အောက်ခြေ ပေါင်ရင်းအထိသာ ရှိသည်..။ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်နှင့် တင်းကြပ်နေရာ၊ တင်သားလုံးလုံး လေးများအထိ ထင်းစွာ မြင်သာနေသည်..။ တုတ်ဖြိုးသော ပေါင်လုံးပေါင်တန်တွေကတော့ အဖွေးသား၊ အနီးကပ် ထိုင်နေသည်မို့ သူ့ဘက်တွင် ရှိနေသော ပန်းအိဖြူ၏ ညာဘက်ပေါင်သားပေါ်မှ မွေးညှင်းနုနု ကလေးများကိုပင် စိုးခိုင်ကျော် မြင်နေရသည်..။ ပြီးတော့ ပန်းအိဖြူက ရေမွေးလည်း ဆွတ်ထားပြန်ရာ သင်းပြန့်ပြန့် ရေမွေးနံ့သည် စိုးခိုင်ကျော်၏ မရိုးမရွဖြစ်နေသော စိတ်ကို ကျလိကျလိ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေသည်..။ ကောင်မလေး စာရေးသောအခါ အဖုံးအကာ မရှိ အပီပေါ်နေသော လက်မောင်းသား ဖြူဖြူဝင်းဝင်း အိအိတို့ တုန်တုန် လွုပ်ခါနေပြန်သေးသည်..။ ကိုယ်အထက်ပိုင်းကို ခပ်ကိုင်းကိုင်း လုပ်၍ တင်ကို နောက်သို့ ပစ်ထားသလိုမျိုး အနေအထားဖြင့် ထိုင်လိုက်ရာ ဘောင်းဘီလေး၏ ခါးစည်းသည်ခပ်ဟဟ ခပ်လျှော့လျှော့ ဖြစ်ကာ အောက်ခံဝတ်ထားသော အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး၏ အပေါ်ဘက်ပိုင်း ထင်းခနဲ ပေါ်၍လာသည်..။
ရင်စည်း အဝတ်ကလည်း ရင်ဘတ်ပေါ် ပို၍ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် ထိကပ်သွားကာ မို့စူစ နို့အုံးလေးများ၏ အထက်နို့သီးချွန်ချွန်လေးသည် ပိတ်သားကို ထိုးဖောက်ကာ ထွက်လာတော့မတတ် ဖြစ်သည်..။ စိုးခိုင်ကျော်ကို နို့ကော့ တင်ပြ သလိုမျိုး ဖြစ်နေရာ၊ ငနဲသားသည် စိတ် အရမ်းကို မရိုးမရွ ဖြစ်လာသည်..။ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့..။ ညာလက် အသာဆန့်ကာ ပန်းအိဖြူ၏ ဘယ်ဘက်နို့အုံသားလေးကို လှမ်းကိုင်ဆွဲပွတ်လိုက်မိလေသည်..။ နုနုအိအိ နို့အုံသား ဖူးဖူးလေးများကို ကိုင်ထိလိုက်ချိန်တွင် စိုးခိုင်ကျော် ၏ တစ်ကိုယ်လုံး ဓါတ်လိုက်ခံရသလိုမျိုးပင် ထိုးခနဲ ထွန့်ခနဲ လွုပ်ခါ ခံစားလိုက်ရသည်..။ စိုးခိုင်ကျော်သည် မိန်းမ နို့တွေကို ကိုင်ဖူး ဆုတ်နယ်ဖူးပါသည်..။ သို့သော် အပျိုပေါက်မလေး၏ ငုံဖူးစ နို့အုံသား နုနုထွတ်ထွတ်လေးကိုတော့ ဒါ ပထမဆုံး ထိစမ်း ကိုင်မိခြင်း ဖြစ်သည်..။ နို့က သိပ်မကြီးလှသေး..။ စူစမျှသာ ရှိသေးသော်လည်း ထိတွေ့မွု ဖီလင်ကတော့ ကောင်းလှသည်..။ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖိန်းရှိန်း၍ သွားသည်..။ “ အို……..” နို့အစမ်း ခံလိုက်ရသော အပျိုပေါက်မလေးလည်း တုန်ရင်လွုပ်ခါသွားသည်..။ ကြောင်မလေးလို ခုန်၍ထသည်။ သူမ၏ ရင်ဘတ်ကို ကိုင်စမ်းနေသော စိုးခိုင်ကျော်၏ လက်ကိုလည်း ပုတ်ထုတ်ပစ်သည်။ ကောင်မလေး အသက်ရွူပြင်းကာ မျက်နှာလည်း ရှက်သွေးဖျန်း၍ နီမြန်းနေလေသည်။ “ ဟိတ်….ဘာဖြစ်တာလည်း ပန်းအိရ…..” စိုးခိုင်ကျော်က ရယ်ကျဲကျဲ လုပ်ကာ မေးသည်။ “ သမီး ရင်ဘတ်ကို ဘာလို့ စမ်းတာလည်း…” “ ချစ်လို့ပေါ့…ပန်းအိရဲ့……” “ ဟာ…..ဦးစိုးနော်… သမီး ငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတာ..၊ ဒါမျိုး မပြောနဲ့…” “ မငယ်တော့ပါဘူး..ပန်းအိရ..၊ နို့လေးတောင် အတော်စူနေပြီပဲဟာ………” စိုးခိုင်ကျော်၏ လက်က နို့ဆီ လှမ်းလာပြန်သည်။ ပန်းအိဖြူက အသာဖယ်ပစ်လိုက်ရာ နို့ကို မကိုင်မိ..။ “ သွား……မသိဘူး..” “ ပန်းအိကလဲကွာ…. လိမ္မာသားနဲ့…” “ မားမားနဲ့ တိုင်ပြောမယ်…. သိလား…..” ချာတိတ်မလေး မျက်နှာတင်းတင်းနှင့် ဆိုလေရာ စိုးခိုင်ကျော်မှာ ထိတ်ထိတ်ပြာပြာ ဖြစ်သွားရသည်..။
အပျိုပေါက်မလေးများသည် စိတ်ထင်ရာ စွတ်ရွတ် လုပ်တတ်သည် မဟုတ်ပါလား..။ ထိုအချိန်မှာပင် ကိုတုတ်ဖြူနှင့် အေးအေးမော်တို့ လင်မယား ဈေးက ပြန်လာကြသည်။ အိမ်ခြံဝင်းထဲ ဝင်လာသည်ကို မြင်သည်နှင့် စိတ်မလုံမလဲ ဖြစ်နေသော ပန်းအိဖြူသည် အိမ်အတွင်းဘက်သို့ ပြေးဝင်သွားသည်..။ စိုးခိုင်ကျော်မှာလည်း လိပ်ပြာမသန့်ပဲ အေးအေးမော်တို့ကို နွုတ်ဆက်ဖို့ပင် မေ့လျှက် ထိုင်ရမလို ထရမလို ဖြစ်နေသည်..။ “ ဟော…. ကိုစိုး…. ပန်းအိရော…. စာသင်လို့ ပြီးသွားပလား…” ဘာဖြစ်ခဲ့သည်ကို မရိပ်မိလေသော အေးအေးမော်ကသာ နွုတ်ဆက်သည်..။ “ အော်…….အင်း…ပြီးပါပြီ… ဟို ..ကျနော်..သွားစရာလေး ရှိလို့ စာသင်တာ စောစော ရပ်လိုက်တယ်..သွားမယ်နော်…” စိုးခိုင်ကျော်က ကမန်းကတန်း နွုတ်ဆက်စကားဆိုကာ ကသောကမျောပင် ထ၍ထွက်လာခဲ့သည်။ စိုးခိုင်ကျော်သည် မိမိအခန်းဘက် အမြန်ကူးလာပြီးနောက်၊ စိတ်မလုံပဲ ထိုင်လိုက်ထလိုက်၊ ဟိုလျှောက်သည်လျှောက် လုပ်နေမိသည်..။ အပြင်သွားစရာ ရှိသည်ဟု ..ထွက်လာခဲ့သည်..။ တကယ် သွားစရာ မရှိသောကြောင့် ယောင်လည်လည် ဖြစ်နေသေးသည်..။ ပြီးမှ ရုပ်ရှင် ဝင်ကြည့်ပစ်လိုက်သည်..။ ရုပ်ရှင်ကိုမူ စိတ်မဝင်စားနိုင်။ ပန်းအိဖြူက မိမိ နို့ကိုင်ခဲ့သည်ကို သူ့အမေအား ပြန်တိုင်လိုက်လျှင်တော့ အခက်ပဲ ဟု တွေးကာ စိုးရိမ်ပူပန်၍ နေသည်..။ အေးအေးမော်နှင့် က တစ်ရုံးတည်း ဖြစ်သည့်အပြင်.. မိသားစုလိုလည်း ရင်းနှီးနေရာ ၊ မိမိ လက်ကမြင်းခဲ့သည့် ကိစ္စကို အတိုင်ခံရလျှင် စိုးခိုင်ကျော် အရှက်လုံးလုံး ကွဲရပေတော့မည်..။ သည်လူတွေ မျက်နှာ ဘယ်လိုကြည့်ရတော့မှာလည်း ဟု တွေးပူနေသည်..။ မြို့ထဲတွင် ခြေဦးတည့်ရာ လျှောက်သွား၊ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဝင်ထိုင်နှင့် အချိန်ဖြုန်းနေကာ မိုးအတော်ကြီးချုပ်မှ ပင် အိမ်ပြန်၍ လာခဲ့သည်.။ ထိုနေ့ညက ကောင်းကောင်းပင် အိပ်မပျော်နိုင်ခဲ့..။ ပန်းအိဖြူ တိုင်ပြောလိုက်လျှင် ဒုက္ခဟု တွေးကာ စိုးရိမ်ပူပန်၍ တလူးလူး တလိမ့်လိမ့် မပျော်တစ်ချက် ပျော်တစ်ချက် ဖြစ်ရင်း မိုးလင်းခဲ့ရသည်..။
စိုးခိုင်ကျော် နို့ကိုင်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်ကို ၊ ပန်းအိဖြူက တိုင်မပြောခဲ့ပါချေ။ တိုင်မပြောသည့်အပြင် ထိုသို့ နို့အကိုင်ခံရမွုကြောင့် ရင်ဖိုမောဟိုက်ကာ ပူထူရှိန်းဖိန်းလျက် တစ်ကိုယ်လုံး ဖြိုးဖြိုးဖျန်းဖျန်း ဖြစ်သွားခဲ့ရမွုကို တသသ ဖြစ်လျက် ကြည်နူး သဘောကျ၍ နေမိလေသေးသည်..။ ထို့ပြင် မိမိက တိုင်ပြောမည်ဟု ပြောလိုက်ချိန်တွင် စိုးခိုင်ကျော် မျက်နှာ အတော်ပျက်သွားပုံကိုလည်း မြင်ယောင်မိသည်။ မိမိ ထိုသို့ ပြောလိုက်မွုသည် စိုးခိုင်ကျော်အပေါ် စိမ်းစိမ်းကားကားနှင့် လွန်များသွားလေသလားဟုပင် အပျိုပေါက်မလေး တွေးနေမိသည်..။ ပန်းအိဖြူ၏ ဆူဖြိုးစ သွေးသားတို့သည် အတွေ့ထူးကို တစ်မျိုးနှစ်ခြိုက်ကာ သူမ၏ စိတ်တို့သည်လည်း ထွေပြားလာခဲ့သည်..။ နောက်နေ့သည် ရုံးပိတ်ရက် ဖြစ်သည်..။ ဈေးလည်း ပိတ်သောကြောင့် ကိုတုတ်ဖြူ ဆိုင်မထွက်..။ အိမ်မှာ မိသားစု စုံညီနေသည်..။ ဘဲပေါင်ဆီချက် ခေါက်ဆွဲ လုပ်စားသည်..။ သည်လို ရုံးပိတ်ရက်များတွင် စိုးခိုင်ကျော်သည် ပန်းအိဖြူတို့ အိမ်ဘက်ကူးလာကာ စကားပြောဆိုနေလေ့ ရှိပေရာ၊ မနက်ကတည်းကပင် ပန်းအိဖြူသည် စိုးခိုင်ကျော်ကို မျှော်၍ နေသည်..။ စာကြည့်စားပွဲတွင် ထိုင်ကာ စာဖတ်သလိုလို၊ ရုပ်ပြစာအုပ်ကြည့်နေသလိုလို၊ သချာင်္တွက်သလိုလို လုပ်နေသော်လည်း နားကတော့ ထူးခြားသည့်အသံတို့ကို တစွင့်စွင့် ဖြစ်နေသည်..။ စိုးခိုင်ကျော်၏ အသံ၊ ခြေသံနှင့် တူသလိုလို ရှိသော အသံတို့ကြားရလေတိုင်း ချာတိတ်မလေး ခေါင်းထောင်၍ ကြည့်ရသည်ကလည်း အမောပင်..။ ပန်းအိဖြူ၏ စိတ်ကို ထွေပြားလွုပ်ရှားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်လျက်၊ မျှော်နေမိသော စိုးခိုင်ကျော်ကတော့ ပေါ်မလာခဲ့ပေ.။
ပန်းအိဖြူမှာ စိုးခိုင်ကျော်၏ အခန်းဘက်သို့ ကူးသွားချင်စိတ် ပေါက်လာသည်..။ ထိုစိတ်ကို အသာထိန်းရင်း စိုးခိုင်ကျော် ရောက်လာနိုးနိုးနှင့် စောင့်မျှော်၍သာ နေမိရှာသည်..။ ထို့နောက် စိုးခိုင်ကျော်၏ အခန်းဘက် ကူးသွားတော့မည်ဟု ထိုင်ရာမှ ထမည်ပြုသည်..။ သို့သော် မိမိ၏ ရင်သားများကို ဆွဲကိုင်ခဲ့သော စိုးခိုင်ကျော်ကို မျက်နှာချင်း သွားဆိုင်ရမှာကို တွေးမိပြန်တော့ အပျိုပေါက်မလေးမှာ အလိုလို ရှက်သွေးဖြန်းကာ ကတုန်ကရင် ဖြစ်သည်..။ ထိုင်နေရာမှ မထဖြစ်တော့ ချာတိတ်မ တစ်ယောက် စိတ်ဂနာမငြိမ်ဘဲ၊ အထွေထွေ အပြားပြား အမျိုးမျိုးပင် စိတ်လွုပ်ရှား၍ နေရတော့သည်..။ ထိုအခိုက်… အိမ်ထဲ လှမ်းဝင်လာသော ခြေသံများကို ပန်းအိဖြူ ကြားရသည်..။ စိုးခိုင်ကျော်၏ ခြေသံတွေပင် ဖြစ်ရမည်ဟု တွေးမိကာ ၊ ချာတိတ်မလေး ပျော်သွားသည်..။ ရင်ခုန်သံလည်း သိသိသာသာပင် မြန်လာသည်..။ မျက်နှာ ပူခနဲ ရှိန်းခနဲ ဖြစ်သည်..။ ခြေသံသည် သူမရှိနေသော စာကြည့်စားပွဲသို့ တန်း၍လာသည်..။ စိုးခိုင်ကျော် ရောက်လာတာ သေချာပြီဟု တွေးသည်..။ ဟန်လုပ်ကာ စာကို ငုံ့ကြည့်နေသည်..။ မသိယောင် ဆောင်နေသည်..။ အခုမှ ရောက်လာတယ်..၊ မခေါ်ပါဘူး။ သိအုံးမယ်…ဟု စိတ်ထဲမှ ကြိတ်ကာ ပြောသည်..။ သို့သော် အနားသို့ စိုးခိုင်ကျော် ရောက်လာလျှင် ခုန်ထ နွုတ်ဆက်လိုက်ရန်ကတော့ အသင့်ပြင်ထားသည်..။ သူမ၏ စာကြည့်စားပွဲရှိရာသို့ လျှောက်လှမ်းလာသော ခြေသံက နီးကပ်လာသည်နှင့် အမျှ အပျိုပေါက်မလေး၏ ရင်ခုန်သံသည် ပို၍ မြန်လာသည်..။ ခြေဖျားလက်ဖျားများပင် အေးစက် ချင်သလိုလို ဖြစ်နေသည်..။ ခြေသံသည် သူမ၏ ဘေးနားတွင် ကပ်၍ ရပ်သွားသောအခါ၌ကား ပန်းအိဖြူတစ်ယောက် အသက်ရွူရန်ပင် မေ့နေမိသည်..။ လက်ထဲရှိ ဘောလ်ပင်ဖြင့် စာအုပ်ပေါ်တွင် တွေ့ကရာ ကိန်းဂဏန်းတွေ လျှောက်ရေးနေသည်..။ ပန်းအိဖြူကိုယ်တိုင်ကတော့ မိမိ ဘာတွေ ရေးခြစ်နေမိသည်ကို မသိ..။ ခုန်ထ နွုတ်ဆက်လိုက်မည်အပြုတွင် အနီးကပ် ခေါ်သံ ပေါ်လာသည်..။ “ သမီး……” ခေါ်လိုက်သံက သူမ မိခင် အေးအေးမော်၏ အသံ။ ချာတိတ်မလေးမှာ မျှော်ရသူ ရောက်မလာသောကြောင့် အရမ်းကို မကျေမနပ် ဖြစ်နေသည်..။ ထို မကျေနပ်စိတ်ကြောင့် ဘောလ်ပင်ကို စားပွဲခုံပေါ် ဆောင့်ထိုးချမိသည်..။ “ ဟဲ့…ဟဲ့..ပန်းအိ ဘယ်လို ဖြစ်တာလည်း….” အေးအေးမော်က အံ့သြစွာ မေးသည်..။ ပန်းအိဖြူကတော့ ဟစ်အော်၍ ငိုကြွေးပစ်လိုက်ချင်သည့် စိတ်များကို အတင်းကြိုးစားမျိုသိပ်ကာ၊ အားတင်း၍ ပြုံးရယ်ပြလိုက်ရသည်..။ “ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး…မားမားရာ…၊ သချာင်္တွက်မရလို့ စိတ်ညစ်နေတာပါ…” “ ဒါများ..သမီးရယ်… ဘယ်သချာ င်္တွက်မရတာလဲ…၊ ကိုစိုးလာတော့ မေးပေါ့..၊ သွား… ဘဲပေါင်းဆီချက် သူ့ဆီ ပို့ပေးလိုက်အုန်း…” ဒီနေ့တော့ ကိုယ်တော်ချောက ဘာကြောင့် ဒီဘက် ကူးမလာတာလဲ မပြောတတ်ဘူး..။ အလုပ်များနေလို့ ထင်ပါရဲ့…။ စိုးခိုင်ကျော်ဆီ သွားလိုနေသော ပန်းအိဖြူ သဘောကျသွားသည်..။ နေရာမှ မြူးထူးစွာ ကဆုန်ပေါက်ထသည်..။ အေးအေးမော် အသင့်လုပ်ထားပြီး ဖြစ်သော စတီးလ်ချိုင့်ကို ဆွဲကာ တစ်ဘက်ခန်းသို့ အမြန်ကူးလာခဲ့သည်..။ အိမ်ရှေ့ ဖိနပ်ချွတ်နေရာကိုပါ အလယ်မှ ကာရန်ထားသောကြောင့် ပန်းအိဖြူသည် အိမ်ပြင်သို့ ထွက်ပြီးမှ စိုးခိုင်ကျော်တို့ အခန်းဘက် ဝင်ပေါက်မှ ပြန်ဝင်ရသည်..။
တစ်ခါတည်း တန်း၍ မသွားနိုင်ပါ..။ အိမ်တံခါး ပွင့်နေသည်..။ အပြင်ဘက် ဧည့်ခန်းတွင် မည်သူမျှ မရှိ..။ စိုးခိုင်ကျော်မှာ သည်ဘက်အိမ်ခန်းတွင် တစ်ယောက်တည်း လို နေထိုင်သည်..။ သည်အိမ်ခန်းဘက်သို့ သွားလာကူးလူး နေကျမို့ ပန်းအိဖြူသည် အိမ်ပေါ်သို့ အတုံ့အဆိုင်း မရှိ ခပ်ရဲရဲပင် တက်လာခဲ့သည်..။ ဧည့်ခန်းမှ အိမ်အတွင်းဘက်သို့ ကူးသည့် တံခါးပေါက်လို နေရာတွင် ကာရံထားသော ခန်းဆီး ပါးပါးလေးဆီသို့ အသာခြေဖော့ကာ တိုးကပ်သွားသည်..။ ပြီးတော့ အခန်းဆီးနောက်မှ နေ၍ အသာပင် ချောင်းကြည့်လိုက်သည်..။ စိုးခိုင်ကျော်မှာ တစ်ယောက်တည်း နေထိုင်သူဖြစ်ရာ အပြင်ဘက်ဧည့်ခန်းကိုသာ အကာအရံနှင့် ဖွဲ့ထားကာ အတွင်းဖက်မှာတော့ အခန်းရယ်လို့ သေသေချာချာ ဖွဲ့မထား..။ မီးဖိုခန်းအထိ တိုးလျိုးပေါက်ကြီးဖြစ်သည်..။ အတော်ကျယ်ဝန်းသော ထိုအတွင်းဘက်ခန်းနေရာကို မျိုးစုံပင် အသုံးပြုသည်..။ နေ့လည်နေ့ခင်း လဲလျောင်းစာဖတ်ရာ နေရာလည်း ဖြစ်သလို ထမင်းဟင်း စားသောက်သည့် ထမင်းစားခန်း သဘောလည်း သုံးသည်..။ ထို့ပြင် ရုပ်မြင်သံကြား အပေါ်စက်နှင့် အောက်စက်တို့ကို အပြင်ဧည့်ခန်းထဲတွင် မထားပဲ ၊ သည်အတွင်းဖက်ခန်းထဲတွင်သာ ထားသည်..။ စိုးခိုင်ကျော် အိပ်ခန်းကတော့ အပေါ် အထပ်ခိုးပေါ်တွင် ဖြစ်သည်..။ ချောင်းကြည့်လိုက်သော ပန်းအိဖြူသည် စိုးခိုင်ကျော် တစ်ယောက် အတွင်းဖက်ခန်းထဲတွင် ဗီဒီယို ထိုင်ကြည့်နေသည်ကို တွေ့ရသည်..။ စိုးခိုင်ကျော် ကြည့်နေသည့် ဗီဒီယိုက အပြာကားတော့ မဟုတ်ပါ..။ သာမန် ရိုးရိုးကားလည်း မဟုတ်ပေ..။ အဖော်အချွတ်နှင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း အနမ်းအစုတ် အကိုင်အတွယ် အဖက်အပွေ့များ ပါသည့် ကာလသားကြိုက် ခပ်မိုက်မိုက် ကားဖြစ်သည်..။ ပန်းအိဖြူ ချောင်းကြည့်လိုက်သည့် အချိန်တွင်ရုပ်မြင်သံကြား ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ချစ်ခန်းကြိုက်ခန်း တစ်ခု ပုံရိပ်ထင် ပြသ၍ နေသည်..။ သည်လို ဇာတ်ကားမျိုး ထုံးစံအတိုင်း အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်နှင့် အမျိုးသား သရုပ်ဆောင်တို့မှာ အဝတ်အစားများ မရှိကြ..။
ဗလာကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်၍နေသည်..။ ဇာတ်လိုက်နှင့် ဇာတ်လိုက်မင်းသမီးတို့၏ လိင်အင်္ဂါများပေါ်လွင် နေခြင်း မရှိသော်လည်း ပေါင်ရင်းခွကြား တဝိုက်ကိုတော့ ပညာသားပါပါ ရိုက်ပြထားသည်..။ အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်၏ လှပဆူဖြိုးသော ရင်သားတင်သား ပေါင်လုံး ပေါင်တန်တို့ကို ရမ္မက်ဇော ကြွစဖွယ် အပီ ရိုက်ပြထားသလို၊ အမျိုးသား သရုပ်ဆောင်၏ ကျစ်လစ်တောင့်တင်း သန်မာသော ရင်အုပ်၊ ကျောပြင်၊ လက်မောင်း၊ တင်ပါး စသည်တို့ကိုလည်း မြင်ရသူတို့ အသည်းယားစဖွယ် ထောင့်စုံမှ ရိုက်ပြထားသည်..။ ပန်းအိဖြူကို အထူးသဖြင့် စိတ်လွုပ်ရှားစေသည်မှာ အမျိုးသား သရုပ်ဆောင်က အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်၏ နို့အုံများကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်ဆွဲပေးမွု ပြကွက်များ ဖြစ်သည်..။ မိမိ၏ ငုံဖူးစ နို့လေးများကို စိုးခိုင်ကျော် ဆွဲကိုင် ပွတ်ခဲ့ပုံများကို ပြန်သတိရ ခံစားရသည်..။ အမျိုးသား သရုပ်ဆောင်က နို့ကြီးတွေကို အားရပါးရ ဆွဲကိုင် ဆုတ်နယ်ရုံ သာမက၊ နို့သီးများကို ဖျစ်ညှစ်ပေးခြင်း၊ နို့သီးတို့ကို ကုန်းစို့ခြင်း၊ နို့အုံသားတစ်ခုလုံးကို ပါးစပ်ထဲရောက်အောင် ငုံခဲခြင်း တွေပါ လုပ်ပြပြန်ရာ ၊ ပန်းအိဖြူမှာ မျက်လုံးအဝိုင်းသားနှင့် စူးစိုက်ကြည့်ရင်း၊ အလိုလိုပင် အသက်ရွူ ရပ်သွားသလို အာခေါင်ခြောက်သလိုလိုနှင့် ရင်ဖို၍ နေမိသည်..။ စိုးခိုင်ကျော်က မိမိကို ရင်သားများ ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ် သည်သာမက၊ နို့သီးများကိုပါ စို့ပေး စုပ်ပေး ၊ ဖျစ်ညှစ်ပေးအုံးမှာလား..၊ လုပ်ပေးလျှင် မည်မျှကောင်းမည်နည်းဟု စိတ်ထဲမှာ တမ်းတသည်..။ သူမ၏ ရမ္မက်ဇော သွေးသားတို့သည်လည်း ဆူဝေနိုးထစ ပြုလာသည်..။ အသက်ရွူ မြန်သည်..။ ဒူးများ ချောင်သလိုလို ဖြစ်သည်..။ ကောင်းကောင်းပင် မရပ်နိုင်..။ ယိမ်းယိုင်ချင်သလိုလို ဖြစ်ရာ၊ ကိုင်မိကိုင်ရာ ဧည့်ခန်းကို ပိုင်းခြားကာ ရံထားသည့် သုံးထပ်သားနံရံကို လှမ်းကိုင်ထိန်းလိုက်ရသည်..။ ထိုအခါ လွုပ်ရှားသံမြည်သွားရာ စိုးခိုင်ကျော်သည် ချက်ချင်းပင် ရီမုကွန်ထရိုးဖြင့် အောက်စက်ကို ကမန်းကတန်း ပိတ်ကာ ထိုင်ရာမှ ထ၍ လှမ်းကြည့်သည်..။ ပန်းအိဖြူကို မြင်ရသောအခါ စိုးခိုင်ကျော် လန့်သွားသည်..။ ဖော်ခန်းများ ပါသည့် ဗီဒီယို ခွေ ကြည့်နေတာ လူမိရသလိုမို့ မျက်နှာ ထူပူကာ ဘာလုပ်ရမည် မသိ ဖြစ်သည်..။ ပန်းအိဖြူမှာလည်း မိမိချောင်းကြည့်နေတာကို စိုးခိုင်ကျော် သိသွားသည့်အတွက် မျက်နှာပူသည်..။ အပျိုပေါက်မလေး တစ်ယောက်၏ ရှက်ကြောက်စိတ်တွေကလည်း ဟုန်းခနဲ နိုးထလာသည်..။ ထိုရှက်ကြောက်စိတ်ကြောင့် ပန်းအိဖြူသည် အပေါက်ဝမှနေ၍ ချာခနဲ လှည့်ကာ နောက်ကြောင်းပြန်ပြေးလေသည်.။ စိုးခိုင်ကျော်လည်း ရုတ်တရက်ငေးကြောင်ကာ ရပ်နေမိပြီးမှ အပြင်ဘက်ဧည့်ခန်းထဲသို့ အမြန်ထွက်လိုက်သည်..။ ပန်းအိဖြူသည် အိမ်ရှေ့သို့ ရောက်သွားပြီးမှ ဘဲပေါင်းဆီချက်ထည့်ထားသည့် စတီးလ်ချိုင့်ကို ဆွဲလျက်သား ဖြစ်နေသေးသည်ကို သတိရကာ ချိုင့်ပေးရန် အိမ်ပေါ်သို့ ပြန်တက်သည်..။
ဧည့်ခန်းထဲမှ ထွက်လာသော စိုးခိုင်ကျော်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မိရာ ဖိနပ်ချွတ်နေရာမှပင် ကောင်မလေး ခြေလှမ်းတုံ့ရပ်သည်..။ စိုးခိုင်ကျော်လည်း ဧည့်ခန်းအလယ်လောက်၌ ရပ်နေသည်..။ “ မားမား.. … ပေးခိုင်းလိုက်တာ၊ .. ဘဲပေါင်းဆီချက်….” ပန်းအိဖြူသည် ပါးစပ်မှ အမြန်ပြောသည်..။ လက်ထဲရှိ စတီးလ်ချိုင့်ကို အိမ်ခါးပန်းတွင် တင်သည်..။ ပြီးတော့ ချာခနဲ လှည့်ကာ အပြေးတစ်ပိုင်းဖြင့် ထွက်သွားသည်..။ စိုးခိုင်ကျော်မှာတော့ ကြောင်တက်တက်ဖြစ်ကာ ကျန်နေရစ်သည်..။ ယခုလို ဘဲပေါင်းဆီချက် လာပို့ပေးမွုကြောင့် မိမိနို့ကိုင်ခဲ့သည့်ကိစ္စ သူ့အမေ အေးအေးမော်ကို ပန်းအိဖြူ တိုင်မပြောသေးဟု တွေးမိကာ အတန်အသင့်တော့ စိုးရိမ်ပူပန်မွု ပျောက်သည်..။ မိမိတို့ အိပ်ခန်းဘက် ပြန်ရောက်တော့ ပန်းအိဖြူသည် ရေအိုးစင်သို့ သွားကာ ရေတစ်ခွက် ပြည့်ပြည့်ခပ်ကာ သောက်ချလိုက်သည်..။ ရင်ထဲ အေးသလိုလိုတော့ ဖြစ်သည်..။ ထို့နောက် မိမိ ဘာကြောင့်များ ထွက်ပြေးလာခဲ့မိပါလိမ့်ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကျေမနပ် ဖြစ်သည်..။ တစ်ခါတည်း အခန်းထဲ တန်းဝင်ကာ စိုးခိုင်ကျော်ဘေးနား ကပ်ထိုင်လိုက်လျှင် မိမိကို စိုးခိုင်ကျော်က ပွေ့ဖက်ကာ ရင်ဘတ်ကို စမ်းမှာပဲဟု စဉ်းစားမိကာ .. အပျိုပေါက်မလေး ကြက်သီးထသလိုလို ဖြစ်သည်..။ တစ်ခေါက် ပြန်ထပ်သွားရ ကောင်းမလားဟု ပင် စဉ်းစားမိသည်..။ သို့သော် မိမိ၏ မိဘများလည်း အိမ်မှာ ရှိနေကြရာ ၊ စိုးခိုင်ကျော်နှင့် နှစ်ယောက်တည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်နိုင်မည်မဟုတ် စဉ်းစားမိကာ ၊ ထိုအတွေးကို ဖျက်လိုက်သည်..။ စိုးခိုင်ကျော် မိမိတို့ အိမ်ဘက်ခန်းသို့ ကူးလာပါစေ…ဟုသာ ကြိတ်ဆုတောင်းသည်..။
ချာတိတ်မလေးမှာ တမျှော်မျှော် ဖြစ်ရပြန်သည်..။ စိုးခိုင်ကျော်သည် ပန်းအိဖြူတို့ အိမ်ခန်းဘက်သို့ ကူးလာပါသည်..။ သို့သော် ချိုင့် ပြန်ပေးရုံသာ ဖြစ်သည်..။ ချိုင့်ပေးပြီး ပြန်ထွက်သွားရာ ပန်းအိဖြူနှင့်ပင် စကားတစ်ခွန်း မပြောဖြစ်လိုက်ပေ..။ စိုးခိုင်ကျော်မှာလည်း သူ့ဖာသာ သူ စိတ်မလုံသောကြောင့် ပန်းအိဖြူတို့ အိမ်ခန်းဘက်တွင် ကြာကြာမနေပဲ၊ ချက်ချင်းလိုလို ပြန်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်..။ ဗီဒီယိုကားလည်း ဆက်မကြည့်တော့..။ အိမ်တံခါးပိတ်ကာ အပြင်သို့ အကြောင်းမရှိပဲ ထွက်လာခဲ့ပြန်သည်..။ နောက်နေ့တွေကတော့ ရုံးတက်ရက်တွေ ဖြစ်လေရာ၊ စိုးခိုင်ကျော်သည် ပန်းအိဖြူတို့ အိမ်ခန်းဘက်သို့ မလာတော့ပါ..။ ပန်းအိဖြူက အကြောင်းရှာကာ စိုးခိုင်ကျော်တို့ အိမ်ခန်းဘက် ကူးလာရန်ကလည်း စိုးခိုင်ကျော်သည် ရုံးဆင်းသည်နှင့် အိမ်တန်းမပြန်ဘဲ သူနှင့် အဆက်ဖြစ်နေသူ ဒေါ်ထားရင်ဆိုသူ အမျိုးသမီးနှင့် ချိန်းကာ လိုးလိုက်၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် ဘီယာသောက်လိုက်၊ အခြား အဆက်တစ်ယောက်ဖြစ်သော မသိန်းခင်ကို ခေါ်ထုတ်ကာ ဆော်လိုက် လုပ်နေလေရာ၊ အိမ်ကို မိုးချုပ်မှသာ ပြန်ရောက်နေလေတော့ ပန်းအိဖြူမှာ စိုးခိုင်ကျော်နှင့် ဆုံလိုလှသော်လည်း မဆုံနိုင်ပဲ ရှိနေသည်..။ ဤသို့ဖြင့် စနေနေ့သို့ ရောက်လာသည်..။ စနေနေ့သည် ရုံးအားရက် ဖြစ်လေရာ ပန်းအိဖြူ၏ မိခင် အေးအေးမော်သည် ထမင်းဟင်းများ ချက်ပြုတ်ပြီး ချိုင့်တွင်ထည့်ကာ (၁၀) နာရီဝန်းကျင်လောက်တွင် တရုတ်တန်းရှိ ဆိုင်ခန်းသို့ သွားသည်..။ ကိုတုတ်ဖြူကို ကူညီဈေးရောင်းပေးလျှက် အခြားအရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကာ မိုးစုန်းစုန်းချုပ်လောက်မှ ပြန်လာတတ်ကြသည်..။ သည်တော့ မိမိနှင့် စိုးခိုင်ကျော်တို့ နှစ်ယောက်တည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိကာ မိမိကို စိုးခိုင်ကျော်က နို့ကိုင် နို့ဆွဲ လုပ်ပေတော့မည်ဟု ပန်းအိဖြူက အပိုင်တွက်ထားသည်..။ ထိုနေ့ မနက် အိပ်ရာထကတည်းက စိုးခိုင်ကျော်ကို တမျှော်တည်း မျှော်နေမိတော့သည်..။ စိုးခိုင်ကျော်ကတော့ ပန်းအိဖြူတို့ အိမ်ခန်းဘက်သို့ သွားရန် မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေသည်..။ လိပ်ပြာမလုံဘဲ မျက်နှာပူနေသည်..။ မသွားပဲ နေဖို့ စိတ်ကူးမိသေးသည်..။ သို့သော် ထိုသို့ မသွားပဲနေလျှင် မိမိဘက်က မလုံမလဲ ဖြစ်နေသည်ကို အေးအေးမော်တို့ ရိပ်မိသွားကြမှာကိုလည်း စိုးသည်..။ သူသည် တစ်ပတ်လုံး အေးအေးမော်ကို အကဲခတ်ကြည့်နေခဲ့ရာ၊ ခါတိုင်းလို အခေါ်အပြောမပျက် ပုံမှန်ရှိနေရာ၊ ပန်းအိဖြူ တိုင်မပြောခဲ့ကြောင်း ကတော့ သေချာသလောက် ရှိနေပါပြီ..။
ထို့ကြောင့် စိုးခိုင်ကျော်သည် အသာပင် ဟန်မပျက်နေကာ ပန်းအိဖြူအား စာပြပေးနေကျအချိန်တွင် သည်ဘက်အိမ်ခန်းသို့ဣနြေ္ဒဆည်ကာ အသာကူးလာခဲ့သည်..။ ခါတိုင်းလိုပင် ပန်းအိဖြူကို စာပြသည်..။ ထိုနေ့တွင် အေးအေးမော်သည် အမဲသားနှပ်လေရာ လျှပ်စစ်မီးပျက်သွား၍ မီးသွေးမီးဖိုဖြင့်သာ တည်ရလေရာ ဟင်းကျက်နောက်ကျသွားသည်.။ ခါတိုင်း (၁၀) နာရီကျော်ကျော်လောက် အိမ်က ထွက်နေကျသည် (၁၀) နာရီခွဲပြီးလောက်မှ ထွက်ဖြစ်သည်..။ အရင်လို အနှေးဖြစ် ဆိုသလို လောလောနှင့် ထွက်သွားခဲ့ရာ ကိုတုတ်ဖြူ မှာထားသည့် ကုန်ဖိုးငွေပေးရန် ပိုက်ဆံများ ယူမသွားမိပဲ မေ့ကျန်နေရာ လမ်းခုလတ်ရောက်မှ သတိရ၍ အိမ်သို့ တစ်ခေါက် ပြန်ယူရလေသည်..။ ထိုသို့ အေးအေးမော် အိမ်မှ အထွက်နောက်ကျခြင်း၊ ထွက်သွားပြီးမှ အိမ်သို့ တစ်ခေါက် ပြန်လာခြင်းတို့ကြောင့် နဂိုကမှ လိပ်ပြာမလုံသလို ဖြစ်နေခဲ့သော စိုးခိုင်ကျော်မှာ စိုးရိမ်ပူပန်၍ပင် လာသည်..။ မိမိက ပန်းအိဖြူအပေါ် မရိုးမသား ကိုင်လားတွယ်လား လုပ်ခဲ့သည်ကို အေးအေးမော် သံသယဝင်ကာ စောင့်ကြည့်အကဲခတ် အမိဖမ်းခြင်းများ ဖြစ်လေမည်လားဟု အတွေးပွားမိသည်..။ ထို့ကြောင့် မိမိဘက်က အမှား မရှိရလေအောင် အပြတ်ထိန်းသိမ်းသည်..။ ပန်းအိဖြူနှင့်ပင် သိပ်နီးနီးကပ်ကပ် မနေ။ အတတ်နိုင်ဆုံး ခပ်ခွာခွာ လုပ်နေသည်.။ အပိုစကားတွေပင် မပြော။ စာကိုသာ ဖိသင်နေသည်..။ အပျိုပေါက်မလေးမှာမူ နို့အကိုင် အနှိုက်ခံချင်နေရာ၊ စိုးခိုင်ကျော်က နို့ကိုင်ဆွဲဖို့ ထားတော့ လက်ကလေးကိုသော်မှ မထိမကိုင်၊ ခပ်ခွာခွာလုပ်နေရာ စိတ်ထဲတွင် အရမ်းကို မချင့်မရဲကြီး ဖြစ်နေရတော့သည်..။ စိုးခိုင်ကျော်၏ လက်ကို ဆွဲယူကာ မိမိရင်ဘတ်ပေါ် တင်ပေးလိုသည့် စိတ်ကူးမျိုးပင် ပေါ်လာသည်..။ နို့ကိုင်လာ၊ နို့ဆွဲလာနိုးနှင့် စောင့်လင့်နေရာ စာသင်ပေးမွုသာ ပြီးသွားသည်။ ပန်းအိဖြူ ဆန္ဒ မပြည့်ဝခဲ့ပါ..။ ငုံဖူးစ နို့သားလေးများ ယားကျိကျိနှင့် အခံရခက်အောင် သာ ရှိ၍နေသည်။ စာသင်ပြီးသည်နှင့် စိုးခိုင်ကျော် ပြန်သွားသည်။ ပန်းအိဖြူ တစ်ယောက်တည်း စိတ်တွေ ဗြောင်းဆန်လျှက် ဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်..။ ဟိုတစ်နေ့က မိမိ နို့အဆွဲအကိုင် ခံရစဉ်က ခံစားခဲ့ရမွုတို့ကလည်း အသစ်တဖန် ပြန်လည်ဖြစ်လာကြသည်။ ဟိုနေ့က ချောင်းကြည့်တွေ့မြင်ခဲ့ရသော စိုးခိုင်ကျော် ကြည့်နေသော ဗီဒီယိုကားထဲမှ ဇာတ်လိုက်မင်းသမီး၏ နို့တွေကို ဇာတ်လိုက်မင်းသားက အပီကိုင်တွယ် ဆုတ်နယ်ရုံမက၊ နို့သီးခေါင်းများကိုပါ ပါးစပ်ဖြင့် ငုံကာ စို့ပေး စုပ်ပေးနေပုံများကို မြင်ယောင်လာသည်။ ချာတိတ်မလေး၏ စူစနို့သားလေးများ စုစုပုံ့ပုံ့ ဖြစ်နေကြသည်။ နို့သီးခေါင်းသေးသေးလေးလည်း ချွန်ချွန်ကော့ကော့ ဖြစ်သည်။ သည်နို့အကိုင်အတွယ် ခံချင်သည့် အာသီသကလည်း တိုးသည်ထက် တိုးလာသည်။ ထိန်းသိမ်း ချုပ်တည်း မရနုိူင်တော့အောင် ဖြစ်လာသည်။ သည်လို စနေနေ့မျိုးတွင် သူမ၏ မိခင်အေးအေးမော်လည်း ဆိုင်သွားကာ ညနေမိုးချုပ်မှ ပြန်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့် သည်ဘက်အိမ်ခန်းတွင် ပန်းအိဖြူတစ်ယောက်တည်း။
ဟိုဘက်အိမ်ခန်းမှာတော့ စိုးခိုင်ကျော် တစ်ယောက်တည်း။ အိမ်ကလည်း ခြံဝင်းလေးနှင့် သီးသီးသန့်သန့် လွတ်လပ်မွု အပြည့်ရှိနေသည်။ ဆိတ်ကွယ်ရာနေရာလိုလည်း ဖြစ်နေသည်။ လူအများ သိမြင်နိုင်သည့်နေရာတွင် အရှက်အကြောက်နှင့် ဣနြေ္ဒဆောင်ကာ ထိန်းသိမ်းတတ်သော်လည်း မည်သူမျှ မသိမမြင်နိုင်သည့် ဆိတ်ကွယ်ရာတွင်တော့ ထိန်းသိမ်းချုပ်တည်းထားသည်တို့ ပြေလျှော့ကုန်ကာ ဖောက်ပြားသောင်းကျန်းတတ်သော မိန်းမသားတို့ သဘာဝအတိုင်း ပန်းအိဖြူတစ်ယောက်လည်း စိတ်တွေလွုပ်ရှား ဖောက်ပြားလာသည်။ ရမ္မက်တွေလည်း ထန်သည်ထက် ထန်လာကြသည်။ ထိုရမ္မက်စိတ်တို့၏ စေ့ဆော်မွုကို မခံနိုင်တော့သည့်အဆုံး၊ ပန်းအိဖြူသည် စိုးခိုင်ကျော်ရှိရာ တစ်ဘက်အိမ်ခန်းသို့ ကူးသွားရန် စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်လေတော့သည်။ စိုးခိုင်ကျော်က သူမကို ကိုင်ချင်တွယ်ချင်သည်ကိုတော့ မိန်းကလေးတို့၏ ဗီဇဉာဏ်အသိစိတ်ဖြင့် ပန်းအိဖြူ အကဲခတ်မိသည်။ ရဲရဲတင်းတင်း မကိုင်မဆွဲရဲပဲ ရှိနေသည်မှာ ဟိုတစ်နေ့က မိမိ တိုင်ပြောမည်ဟု ပြောခဲ့သည့်စကားကြောင့် လက်တွန့်ကာ ရှိနေခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်း ကောင်မလေး တွေးသည်။ မိမိဘက်က အကိုင်အဆွဲခံချင်ကြောင်း စိုးခိုင်ကျော် သိအောင်လုပ်ပြနိုင်လျှင် အားလုံး အဆင်ချောမည်ဟုလည်း ကလေးတွေး တွေးသည်။ မိမိ အိမ်ခန်းထဲမှ ထွက်၍အလာ ပန်းအိဖြူ၏ ရင် ဒိန်းဒိန်း ခုန်သည်။ အိမ်ရှေ့တံခါးကို တွန်းဖွင့်၍ ကျွီ ဟူသော ပတ္တာသံ ခပ်တိုးတိုး ထွက်ပေါ်လာမွုကပင် ၊ ချာတိတ်မလေးအတွက် နားကပ်ကာ ဗုံးပေါက်လိုက်သလို လန့်ဖြန့်သွားစေသည်။ ခြေတစ်လှမ်းတိုင်းသည် အပျိုပေါက်မလေးအနေဖြင့် ကြီးမားသော စွန့်စားမွုကြီး တစ်ခု ဖြစ်နေသည်။ အရမ်းလည်း စိတ်လွုပ်ရှားသည်။ ကြောက်စိတ်တွေလည်း ဖြစ်နေသည်။ ရင်ဖိုမောဟိုက်နေသည်ကတော့ မပြောပါနှင့်တော့။ အပြင်ဘက်မှ လူတွေ တော်ရုံတန်ရုံနှင့် လှမ်းမမြင်နိုင်မှန်း သိသည့်တိုင်၊ သည်လို မိမိ တစ်ဘက်အိမ်ခန်းသို့ ကူးလာမွုကို လမ်းသွားလမ်းလာ တစ်ယောက်ယောက် မြင်သွားလျှင် အခက်ဟု တွေးကာ စိတ်ပူပန်နေမိပြန်သေးသည်။ ခြံစည်းရိုး သီးသန့်ခတ်ကာရံထားလျှက် ခြံစည်ရိုးတံခါးလည်း စေ့ပိတ်ထားပေရာ၊ တမင်ပင် တကူးတက ကြည့်မှသာ ခြံဝင်းထဲသို့ မြင်ပေမည်..။
အချိန်က နေ့လည်နေ့ခင်း ထမင်းစားသောက်ပြီးစအချိန်။ အနားယူချိန် ဖြစ်ရာ အိမ်ရှေ့လမ်းပေါ်တွင် လမ်းသွားလမ်းလာ မရှိပေ။ လမ်းသွားလမ်းလာရှိ၍ တကူးတက လှမ်းကြည့်ကာ ပန်းအိဖြူတစ်ယောက် တစ်ဘက်အိမ်ခန်းသို့ ကူးသွားသည်ကို မြင်မိသည့်တိုင် တစ်စုံတစ်ရာ သံသယဖြစ်မည်မဟုတ်။ သည်ရပ်ကွက်ထဲရှိ လူအားလုံးကပင် ပန်းအိဖြူတို့မိသားစုနှင့် စိုးခိုင်ကျော် ရင်းနှီးခင်မင်ကာ နှစ်အိမ်တစ်အိမ်ဆိုသလို ကူးလူးသွားလာ နေတတ်ကြောင်း သိထားကြပြီး ဖြစ်သည်။ မဟာစွန့်စားခန်းကြီး အဖြစ် အားတင်းကာ လာသော ပန်းအိဖြူသည် စိုးခိုင်ကျော် နေထိုင်ရာ အိမ်တစ်ဘက်ခန်းထဲသို့ ရောက်လာသည်။ အိမ်ခန်းထဲ ရောက်တော့ ကြောက်လန့်စိုးရိမ်စိတ်တို့က အတန်ပင် လျော့ပါးသည်.။ အိမ်အရှေ့ဘက် ဧည့်ခန်းထဲတွင် မည်သူမျှ မရှိ။ စိုးခိုင်ကျော်သည် ဧည့်ခန်းနောက်ဘက်ရှိ အိမ်အတွင်းခန်းတွင် ရှိမည်ဟု သိသော ပန်းအိဖြူသည် ဧည့်ခန်းအဖြစ် ပိုင်းကာထားသော အကာအရံ၏ နောက်ဘက်သို့ လှစ်ခနဲပင် ဝင်သည်။ ကောင်မလေး တွက်ထားသည့်အတိုင်းပင် စိုးခိုင်ကျော်က အတွင်းခန်းထဲတွင် ရှိနေလေသည်။ သူ၏ စာရေးစာဖတ်လုပ်သော စားပွဲတွင် ထိုင်ကာ ကော်ဖီသောက်၊ ကိတ်မုန့်စားနေသည်။ ပန်းအိဖြူသည် စိုးခိုင်ကျော် မုန့်ထိုင်စား၊ ကော်ဖီသောက်နေသော စားပွဲနားသို့ သွား၍ရပ်သည်။ ချာတိတ်မလေး ဝင်လာသည်ကို စိုးခိုင်ကျော် မသိပေ။ အနားတွင် ရုတ်တရက် လာရပ်တော့မှ မြင်သွားသည်။ မမျှော်လင့်ပဲ ရောက်လာသည်မို့ စိုးခိုင်ကျော် အံ့သြသည်။ ပန်းအိဖြူကို အကြောင်သား ကြည့်နေသည်။ နို့အကိုင်ခံချင်၍ ရောက်လာသော ပန်းအိဖြူမှာ စိုးခိုင်ကျော်က အကြောင်သား ကြည့်နေသောအခါ အားမလို အားမရ ဖြစ်သည်။ အနားကပ်မိသည်နှင့် စိုးခိုင်ကျော်က မိမိနို့ကို လှမ်းကိုင်စမ်းလိမ့်မည်ဟု တွေးထားသည့်အတိုင်း မဖြစ်သည့်အတွက် စိတ်မောရသည်။ သည်အတိုင်းသာဆိုပါက မိမိလိုလားတောင့်တနေသော ကိစ္စ ဖြစ်လာတော့မည်မဟုတ်ဟု အတွေးပေါက်ကာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အပျိုပေါက်မလေးက မိုက်မိုက်ကန်းကန်းပင် အပြတ်လုပ်လေတော့သည်။ သည်အရွယ်က စိတ်မထင်လျှင် မထင်သလို တဇွတ်ထိုး လုပ်တတ်သည်မဟုတ်ပါလား။
ပန်းအိဖြူသည် ဝတ်ထားသော ဘလောက်အင်္ကျီခပ်ပွပွ၏ ရင်ဘတ်ကြယ်သီးများကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု ခပ်မြန်မြန် ဖြုတ်သည်။ ကြယ်သီးအားလုံး ပြုတ်သွားသောအခါ ကောင်မလေး ဝတ်ထားသော ဘလောက်စ်၏ ရင်ဘတ်သည်လည်း ပွင့်ထွက်သွားလေတော့သည်။ ကျွန်တော်ဖြင့် တကယ်ကို အံ့သြသွားတာပဲ။ ပန်းအိဖြူ လုပ်လိုက်ပုံက တကယ်ကိုယ်တွေ့မျက်မြင် မဟုတ်ရင် ယုံနိုင်စရာ တောင်မဟုတ်ဘူး။ ဒီကောင်မလေး ဒီလောက် ရဲရဲတင်းတင်း လုပ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ဖြင့် ထင်တောင် မထင်ဘူး။ ဘယ့်နှယ် ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ရှိနေတဲ့ အိမ်ခန်းဘက်ကို ကူးလာတာကိုကပဲ သူ့အတွက် လွန်နေပြီလေ။ အခုတော့ ကျွန်တော့်အနား လာရပ်၊ သူဝတ်ထားတဲ့ ဘလောက်စ် ကြယ်သီးတွေကို သူကိုယ်တိုင် ဖြုတ်ဖြုတ်ဆို အကုန် ဖြုတ်ပစ်တာ အံ့ရော။ ကြယ်သီးအားလုံး တစ်လုံးမကျန် ပြုတ်သွားတော့၊ ဘလောက်စ် ရင်ဘတ်ကွဲဟသွားတာမှာ ကောင်မလေးက အပီကို ဆွဲဖွင့်ပစ်လိုက်သေးတယ်။ ရဲတင်းလိုက်တာများ ကျွန်တော်တောင် ဖျားသွားရတယ်။ ပန်းအိဖြူဟာ အတွင်းခံ ဘာမှ မဝတ်ထားဘူး။ ဘရာစီယာလည်း မရှိဘူး။ ဘော်လီလည်း မပါဘူး။ ရှင်မီးလည်း ဝတ်မထားဘူး။ အတွင်းခံ ဘာတစ်ခုမှ ဝတ်မထားတာကြောင့် ဘလောက်စ် ရင်ဘတ်ကို ဆွဲဖွင့်ပြလိုက်တာနဲ့ ချာတိတ်မရဲ့ နို့တွေ အထင်းသား ပေါ်လာတော့တာပေါ့..။ နို့အုံသားလေးတွေတင် မဟုတ်ပါဘူး ၊ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းရှေ့ဘက် အကုန်ကို ပေါ်နေတာ။ ဘိုက်လည်း ပေါ်တယ်။ ချက်လည်း ပေါ်တယ်။ ကောင်မလေးက ရင်ဘတ်ကို ခပ်ကော့ကော့တောင် လုပ်ပြထားသေးတာ။ ကျွန်တော်ကလည်း ဖော်လှစ်ပြထားတဲ့ သူ့နို့အုံတွေကို ကြည့်လိုက်မိတော့တာပါပဲ။ ပန်းအိဖြူက အသက် (–) နှစ်ကျော်ကျော် အရွယ် အပျိုပေါက်မလေးပါ။ နို့သားလေးတွေက အတော်ကို စူနေကြပါပြီ။ နုနုထွတ်ထွတ် နို့နှစ်လုံးဟာ မို့မို့ဝန်းဝန်းလေးကို ဖြစ်လို့။ နို့သီးကတော့ သိပ်မရှည်သေးဘူး။ ဂုန်ညင်းဒိုး အကြီးစားသာသာ ရှိနေတဲ့ နို့အုံသားစူစူလေးတွေအပေါ်မှာ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက ချွန်တွန်တွန် ကြွတတလေး ရှိနေကြတာ။
ကျွန်တော် ဘယ်လက် အသာဆန့်ထုတ်ပြီး ပန်းအိဖြူရဲ့ ညာဘက်နို့လုံးလေးကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် မိန်းမလိုးဘူးပါတယ်။ နို့လည်း ဆွဲကိုင်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် လိုးဖူးတဲ့ မိန်းမတွေက အသက် (၂၀) ကျော် (၂၅) နှစ်အရွယ်တွေ။ ကျွန်တော့်အဖို့ ဒီလို အသက်ငယ်ငယ် အပျိုပေါက်မလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အကာအကွယ် အဖုံးအကွယ် မရှိ ပကတိနို့အုံ နုနုကို အခု ပထမဆုံးထိကိုင်ဖူးရတာပါပဲ။ သူ့နို့အုံသား စူစူနုနုလေးတွေကို ထိကိုင်ဆုတ်လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ဒိန်းခနဲတောင် တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။ ဆုတ်ကိုင်လိုက်ရတဲ့ နို့သားက နုနုအိအိနဲ့ တင်းတင်းမို့မို့လေး။ အဲဒီ နို့အုံလေးပေါ်မှာ ညာလက်ညှိုးလက်ခလယ် ၊လက်သူကြွယ် လက်သုံးချောင်းတင်၊ လက်မနဲ့ လက်သန်းက နောက်ဘက်က ထိလို့၊ အသာဆုတ်နယ်ပွတ်လိုက်တယ်။ လက်ဝါးနဲ့ နို့အုံသားပေါ် အိနေအောင်လည်း ထိထားလိုက်တယ်။ နုနုထွတ်ထွတ် အပျိုဖြစ်ကာစ နို့သားစူစူလေးတွေဟာ ကျွန်တော့်ဘယ်လက်ဖဝါးအောက်မှာ အိထွေးနေတာပဲ။ အသာကိုင်ဆုတ်နယ်ပေးပြီး လက်ကို ကျန်တဲ့ နို့အုံသားတစ်ဘက်ပေါ် ပြောင်းတယ်။ ဆွဲကိုင်ပေးတယ်။ “ အို…..ကြည့်ပါလား……ဦးစိုးနော် ကိုင်ပြန်ပြီ..” ပန်းအိဖြူက သူ့နို့တွေ ဆုတ်ကိုင်ဆွဲနေသော စိုးခိုင်ကျော်ကို မျက်စောင်းလေးခဲကာ ပြောလိုက်သည်။ အသံက ညုတုတုလေး။ အသွင်အပြင်ကလည်း ခရာတာတာ။ ဆွဲဖယ် ရုန်းထွက်ခြင်းလည်း မပြု။ သည်တော့ စိုးခိုင်ကျော်ကလည်း နို့အုံနုနုလေးများကို သဘောရှိ ဆွဲဆုတ်နယ်လေတော့သည်။ “ ဟင့်……ယားတယ် ဦးစိုးရ…. အို…အိုကွာ…ယားတယ်လို့ ဆို…” ပန်းအိဖြူ၏ အသံလေးများ တုန်ရင်နေသည်။ ရင်ကလည်း ဒိန်းဒိန်း ခုန်၍နေသည်။ နို့အကိုင်ခံနေရပြီဖြစ်သော်လည်း ဟိုနေ့က ချောင်းကြည့် မြင်တွေ့ခဲ့ရသော ဗီဒီယိုကားထဲကလို နို့စို့ပေးတာ မခံရသေးသောကြောင့် စိတ်ထဲက သိပ်မကျေနပ်သေး။
ဗီဒီယိုကားထဲက ဇာတ်လိုက်မင်းသမီး နို့ကို ဇာတ်လိုက်မင်းသားက စို့ပေးပုံများကို တရေးရေး ပြန်မြင်ယောင်သည်။ “ ပန်းအိကို ချစ်တယ်ကွာ…” စိုးခိုင်ကျော်က အပျိုပေါက်မလေး၏ ငုံဖူးစ နို့အုံသားနုနုလေးများကို အသာအယာ ဆုတ်နယ်ပေးရင်း ပြောသည်။ ဘယ်ဘက်ပါးလေးကိုလည်း ရွတ်ခနဲမြည်အောင် နမ်းလိုက်သည်။ “ ဦးစိုးနော်… သမီးက ငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတာ.. ဒီလိုမျိုး မပြောနဲ့..” “ ဘယ်မှာ ငယ်ရမှာလဲ..ပန်းအိရ..နို့တွေ တော်တော်ကို စူနေပြီပဲ ဥစ္စာ…” “ ဦးကတော့… ပန်းအိကို အရမ်းကို ချစ်တာပဲ သိလား….” စိုးခိုင်ကျော်က ပြောကာ ကျန်ပါးတစ်ဘက်ကို နမ်းလိုက်ပြန်သည်။ အပျိုမလေး ရင်ထဲ နွေးခနဲ ဖြစ်သည်။ မျက်နှာလည်း ရဲခနဲ ဖြစ်သည်။ ချာတိတ်မလေးသည် ဘာမျှ မပြောပါ။ သူမ၏ ရင်ထဲကတော့ ( သမီးကလည်း ဦးစိုးကို ချစ်ပါတယ် ) ဟု ကြိတ်ကာ ပြောနေ၏။ စိုးခိုင်ကျော်သည် ပန်းအိဖြူ၏ နို့အုံလေးနှစ်ခုကို စိတ်ကြိုက်ဆုတ်နယ် ကိုင်သည်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကို ကိုင်းလျှက် ညာဘက်နို့သီးကို ပါးစပ်နှင့် ငုံကာ အသာစို့ပေးသည်။ ကောင်မလေးမှာ …. စိုးခိုင်ကျော် နို့စို့ပေးလိုက်မွုကြောင့် အသက်ရွူတွေ ပင်မှားလျှက် အပီအပြင် ကို ကြည်နူးနှစ်သိမ့် သာယာသွားရလေသည်။ ကျွန်တော်က သူ့နို့သီးခေါင်းလေးကို ကုန်းစို့ပေးပြီး သူ့မျက်နှာလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ ပန်းအိဖြူက အပီအပြင် ပြုံးပြတယ်။ နို့စို့ပေးတာ စိတ်မဆိုး၊ သဘောကျတယ် ဆိုတဲ့ အထာပြလိုက်တာလေ။ ဒီအချိန်မျိုးဆို သူတို့ အိမ်ဘက်ခန်းမှာ ဘယ်သူမှ မရှိမှန်း သိထားတာကြောင့် ( ကောင်မလေးကလည်း လိုလားနေတဲ့ အခြေအနေ ရှိနေတာမို့) ကျွန်တော်လည်း ခပ်ကဲကဲ လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ ပန်းအိဖြူ ဝတ်ထားတဲ့ စကပ်လေး အောက်ကို ညာဘက်လက် ထိုးသွင်းပြီး ပေါင်ကြားက စောက်ပတ်ကို လှမ်းကိုင်စမ်းလိုက်တာပါပဲ..။ ချာတိတ် ငြိမ်ခံနေရင် ရှေ့ဆက်တိုးမယ်၊ ငြိမ်မခံဘဲ ရုန်းဖယ်ရင် စိတ်မဆိုးအောင် တောင်းပန်မယ်၊ ချော့မယ် ဆိုပြီး စွန့်လိုက်တာ….။ ပန်းအိဖြူဟာ နိုင်လွန်ပင်တီ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီတိုလေး ဝတ်ထားပါတယ်။ စစချင်း အောက်ခံပင်တီဘောင်းဘီတိုကလေးရဲ့ ခွဆုံအသားနေရာပေါ်မှနေပြီး စောက်ပတ်ကို အသာကိုင်ပွတ်ပေးတယ်။ စောက်ဖုတ်လေး ဖုပြီး ဖောင်းနေတာ စမ်းမိတယ်။ နို့ဆွဲ၊ နို့စို့ လုပ်ပေးထားတာကြောင့် ပန်းအိဖြူ စိတ်လွုပ်ရှားပြီး နှာထနေတာပဲလေ။ သူ့စောက်ပတ်လေးကလည်း ဖုဖောင်းနေတာပေါ့။ ဖုထစ်နေတဲ့ စောက်ပတ်နွုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုအကြားက စောက်ဖုတ်အကွဲနေရာကို အောက်ခံပင်တီဘောင်းဘီတိုလေးအပေါ်ကပဲ အသာပွတ်ပေးတယ်။ ကိုင်တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီအဖုတ်အကွဲကြောင်းအတိုင်း လက်ခလယ်ထိပ်နဲ့ ဖြည်းဖြည်းလေး ပွတ်ဆွဲပေးတယ်။ ထောင်ထောင်ဖုဖုကလေး ဖြစ်နေတဲ့ စောက်စေ့ကို စမ်းမိတယ်။ အဲဒီ စောက်စေ့ကို လက်ခလယ်ထိပ်နဲ့ပဲ အသာခပ်ဖိဖိလေး ပွတ်ပေးတယ်။ အပျိုဖြစ်ကာစ ချာတိတ်မငယ်ငယ်လေးရဲ့ စောက်စေ့မို့လား မသိဘူး။ ထိစမ်းပွတ်တာနဲ့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ဓါတ်လိုက်ခံရသလို ဖြိုးခနဲ ဖြန်းခနဲ ဖြစ်တယ်။ အတွေ့က သိပ်ကောင်းတာဘဲ။ သူ့ စောက်ပတ် စိုတိုတိုဖြစ်နေတာကိုလည်း သတိပြုမိလိုက်ပါရဲ့။ အပျိုပေါက်မလေးဆိုတော့ ပန်းအိဖြူရဲ့ စောက်ပတ်ကလည်း ဆူဖြိုးစပဲရှိတာ။
သိပ်အကြီးစားကြီး မဖြစ်သေးဘူး။ ပေါင်ရင်းခွကြားနေရာမှ မို့မို့ခုံးခုံးနဲ့ ဖောင်းဖောင်းလေး ဖြစ်နေရုံပဲ။ ကျွန်တော်က ညာလက်ခလယ်ကို အသာကွေးပြီး လွုပ်ရှားလိုက်တာ၊ ပန်းအိဖြူ ဝတ်ထားတဲ့ အတွင်းခံပင်တီဘောင်းဘီလေး အောက်ကို လက်ခလယ် တိုးဝင်သွားပါလေရော။ အကာအကွယ် မရှိတော့တဲ့ သူ့စောက်ပတ်ကို ထိကိုင်နေမိပြီလေ။ ပန်းအိဖြူရဲ့ စောက်ပတ်မှာ အရည်ကြည်တွေ စိုနေတယ်။ စောက်ဖုတ်နွုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုအလယ်အကွဲနေရာ တဝိုက် လေးငါးခါလောက် လက်ခလယ်နဲ့ ပွတ်ဆွဲတယ်။ သူ့စောက်ခေါင်းပေါက်လေးထဲကို လက်ချောင်း ထိုးထည့်တယ်။ မဝင်ဘူး ။ သုံးလေးခါလောက်ကို စောက်ပတ်ထဲ လက်ချောင်း ထိုးသွင်းကြည့်တာ ရကို မရဘူး..။ ချာတိတ်မလေးကတော့ ငြိမ်ခံနေတာပါပဲ။ သူ့စောက်ခေါင်းပေါက်လေးက ကျဉ်းလွန်းလို့ပဲလား။ ကိုယ်ကပဲ အပေါက်တည့်အောင် မသွင်းတတ်လို့လား။ ဘာကြောင့်မှန်း မသိ၊ ဝင်အောင် မသွင်းနိုင်ပဲ ဖြစ်နေတာ။ ဒါကြောင့် အသာချိုထားလိုက်ပြီး စောက်စေ့ကိုပဲ အဓိကထား ပွတ်ပေးတယ်။ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်း အတိုင်းလည်း ပိုပြီး ထိထိမိမိဖြစ်အောင် ပွတ်ဆွဲတယ်။ “ အောက်ခံဘောင်းဘီ .. ချွတ်လိုက်ပါလား ” စောက်ပတ်နှိုက်ရင်းက ကောင်မလေးကို ပြောတယ်။ “ ဟင့်အင်း….. မချွတ်ဘူး…” ပန်းအိဖြူရဲ့ အသံလေး သိသိသာသာ တုန်နေတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီ မချွတ်ရသေးပေမယ့် သူ့စောက်ပတ်ကတော့ အဖုံးအကာ ဘာမှ မရှိတော့ပါဘူး။ ပေါ်တင်ကြီး ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်က အပီပြင်ကို ကိုင်နေပွတ်နေ နှိုက်နေနိုင်ပါပြီ..။ နှစ်မိနစ်လောက်လည်း ကြာရော ပန်းအိဖြူဟာ ဗြုံးဆို ကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်ကို တက်ထိုင်လာပါလေရော..။ ကျွန်တော်က ဆွဲယူ အထိုင်ခိုင်းတာတောင် မဟုတ်ဘူး။ သူ့ဖာသာ သူ တက်ထိုင်ပစ်လိုက်တာ..။ ကောင်မလေး အရသာတွေ့ပြီး စိတ်လည်း အတော် ထကြွရွနေလို့ ခပ်ရဲရဲ ခပ်ကဲကဲ လုပ်လာတာလေ..။ တကယ်ပါပဲ..။ ကျွန်တော်တောင် အံ့အားသင့်သွားရတာ..။ ကားစွင့်စ သူ့တင်ပါးလုံးလုံး ကျစ်ကျစ်လေးဟာ ကျွန်တော့်ပေါင်ရင်းမှာ အိခနဲကို ထိမိနေတာ…။ ကျွန်တော်က သူ့ချိုင်းအောက်ကနေ လက်နှစ်ဘက်ထိုးလျှိုပြီး သူ့နို့နှစ်လုံးကို စုံကိုင်တယ်။
ဘလောက်စ် ရင်ဘတ်က ပွင့်ပြီး အထင်းသားပေါ်နေတဲ့ နို့အုံလေးနှစ်လုံးကို ခပ်တင်းတင်းပဲ ကိုင်ညှစ်တယ်..။ “ ကောင်းလား…..” စောက်ပတ်ကို ကိုင်ပွတ်ပေးရင်း သူ့ညာဘက်ပါးလေးကို ရွတ်ခနဲနေအောင် နမ်းပြီး မေးလိုက်တယ်။ “ ကောင်း…တယ်….” ပန်းအိဖြူက ပြန်ပြောတယ်။ ညာဘက်နားရွက်လေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ တို့ရက်ပေးလိုက်တော့ ချာတိတ်မလေး တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ ပေါင်ပေါ်တက်ထိုင်ထားတာက ကောင်းပေမယ့် ကောင်မလေးကို စိတ်ကြိုက် မကိုင် မနှိုက်နိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ ဒီလိုတက်ထိုင်ထားရင်း ကိုင်နေ နှိုက်နေရတာကလည်း ငါးမိနစ်လောက် ရှိလာတော့ တစ်မျိုးပြောင်းချင်လာတယ်။ ပန်းအိဖြူကို စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ ရမရ စမ်းကြည့်ချင်လာတာလဲ ပါတာပေါ့..။ “ မတ်တတ် ရပ်လိုက်နော်….” ခပ်တိုးတိုးပဲ ပြောရပါတယ်။ ကောင်မလေးက ချက်ချင်းပဲ ပြောသလို လုပ်တယ်။ ကျွန်တော့် ပေါင်ပေါ် တက်ထိုင်ထားရာက ထရပ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကျောပေးပြီး ရပ်မိသွားရော။ ကျွန်တော်က သူဝတ်ထားတဲ့ စကပ် နောက်ကွဲလေးကို အပေါ် ဆွဲလှန်တင်တယ်။ စကပ်က အတိုပေမယ့် ခပ်ကြပ်ကြပ်ဆိုတော့ အောက်စကနေ ဆွဲလှန်ရတာ အဆင်မပြေဘူး..။ လန်တက်မသွားဘူး။ ကြပ်ပြီး တင်းခံနေတယ်။ အဲဒီတုန်းမှာပဲ ပန်းအိဖြူက သူ့စကပ်ကို တစ်ခုခု လုပ်လိုက်တယ်။ စကပ်ခါးစည်းက ချိတ် (ဒါမှမဟုတ်) ကြယ်သီးကို ဖြုတ်လိုက်တာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သေချာတော့ မသိဘူး။ ကြပ်တပ်တပ်ဖြစ်နေတဲ့ စကပ်တိုလေး လျော့ရဲရဲနဲ့ နည်းနည်းချောင်သွားတယ်။ စကပ်ကို အပေါ်လှန်တင်ရတာ ဟန်ကျသွားတယ်။ ကျွန်တော် ဘာလုပ်လုပ် ဒီကောင်မလေး ခံမှာပဲဆိုတာ သေချာနေပြီမို့ ကျွန်တော်က စကပ်လှန်တင်ပြီးတာနဲ့ပဲ ပန်းအိဖြူရဲ့ အောက်ခံပင်တီဘောင်းဘီတိုကလေးကို ဒူးဆစ်နားရောက်အောင် လက်မြန်ခြေမြန်နဲ့ ဆွဲချွတ်ချပစ်လိုက်တယ်။ စကပ်လှန်တင်ထားပြီး အောက်ခံပင်တီဘောင်းဘီတိုလေးကို ဆွဲချပစ်လိုက်တော့ ပန်းအိဖြူရဲ့ ဖင်ကြီး အပြောင်သား ပေါ်လာတော့တာပဲ။ ကျွန်တော်က စောက်ပတ်နှိုက်ပွတ် ကလိပေးနေတာကို အရသာတွေ့ ဖီလင်တက်နေတာတော့ သိပ်ကို ထင်ရှား သိသာလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကလည်း နည်းနည်းလေးမှ နောက်တွန့်မနေတော့ဘူး။ အားနာမနေတော့ဘူး။ ပန်းအိဖြူရဲ့ စောက်ပတ်ကို အားရပါးရပဲ စိတ်ကြိုက် ထိုးကိုင်ပွတ်ကလိ နှိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ ပွတ်ရုံ ကိုင်ရုံတောင် မဟုတ်ပါဘူး။ စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲကိုလည်း ညာလက်ခလယ် ထိုးထည့်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ အပေါက်တည့်တယ်။ ချော်မထွက်သွားဘူး။ ကိုယ့်လက်ချောင်းက သူ့စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲကို အိခနဲ နစ်ဝင်သွားတယ်။ ကြပ်တော့ ကြပ်နေတာပဲ။ “ အာ့….. ထိုးထည့်ပြန်ပြီ….” ပန်းအိဖြူ ဆတ်ခနဲ တုန်ခါသွားပြီး ပါးစပ်ကလည်း အသံလေး တစ်ချက်ထွက်တယ်။
ဒီအသံကိုတော့ ကျွန်တော် ကောင်းကောင်း ကြားလိုက်ရပါတယ်။ စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ အဆုံးဝင်သွားတဲ့ ကျွန်တော့် လက်ခလယ်ဟာ ဘေးနှစ်ဘက်မှာ ခပ်လုံးလုံး အသားမြှောင်းနှစ်ခုနဲ့ ဖိညှပ်ထားသလို ထိတွေ့ခံစားရတယ်။ လက်ခလယ် ထိပ်ပိုင်းကတော့ ခပ်လုံးလုံး ချောချော အရာတစ်ခုနဲ့ ထိမိနေတယ်။ စောက်ပတ်ထဲမှာ အရည်ကြည်တွေ စိုနေတယ်။ စောက်ရည်တွေကလည်း အတော်ကို များတာ။ ရွမ်းရွမ်းစိုနေတယ်လို့တောင် ပြောနိုင်တယ်။ စောက်ပတ်ထဲ အဆုံးဝင်သွားတဲ့ လက်ခလယ်ကို ကျွန်တော်က ဆွဲထုတ်ပြန်သွင်း လွုပ်ရှားပေးတယ်။ ပန်းအိဖြူရဲ့ စောက်ပတ်ကို လက်ချောင်းနဲ့ လိုးပေးတဲ့ သဘောပေါ့။ စစချင်း လေးငါးခြောက်ချက်လောက်ကိုတော့ ခပ်ဖြည်းဖြည်း ဆွဲထုတ်ပြန်သွင်း လုပ်တယ်။ ညှောင့်တဲ့ သဘောမျိုးပါ။ လက်ချောင်း ပြန်ထိုးသွင်းတာမှာလည်း အားထည့်ပေးတယ်။ ဆောင့်လိုး တယ်ပြောရမလားပဲ။ ချာတိတ်မလေးဆိုတာ တုန်တခိုက်ခိုက်ကို ဖြစ်နေတာပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ တောင်နေတဲ့ လီးချောင်းကြီးကလည်း တငေါ့ငေါ့ကို လွုပ်လို့..။ လီးထိပ်မှာ အရည်ကြည်တွေတောင် စိုလာနေတာ ရင်ထဲမှာလည်း ဖိုကနဲ အေးကနဲ ကိုဖြစ်လို့..။ ကျွန်တော်တောင် ဒီလိုဖြစ်ရင် အပျိုပေါက်မလေး ပန်းအိဖြူ ဘယ်လိုစိတ်လွုပ်ရှားပြီး ဘယ်လောက် ဖီလင်တက်နေမယ်ဆိုတာ ပြောနေစရာ လိုမယ် မထင်ဘူး။ ဒီကောင်မလေးက ပေါင်ကို ကွပေးတယ်။ ဒူးကွေးကွေးလေး ဖြစ်တယ်..။ ဖင်ကို ပိုနောက်ကော့ပေးတော့ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းက ရှေ့ကိုတောင် ကိုင်းကျတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့စောက်ပတ်ကို ထိုးပြီး လိုးပေးနေတဲ့ လက်ခလယ်ကို ပိုပြီး မြန်မြန်သွက်သွက်နဲ့ အားပြင်းပြင်း လွုပ်ရှားပေးတယ်။ လက်ချောင်းနဲ့ လိုးတဲ့အရသာကို ပန်းအိဖြူ အပြတ်ခံစားရအောင် ဖန်ပေးလိုက်တယ်။ သူမစောက်ပတ်ထဲက အရည်ကြည်တွေ စိုပြီး ထွက်လာတာ အများကြီးပဲ။ ကောင်မလေး နှစ်ခါသုံးခါလောက်တောင် ပြီးသွားသလားတောင် မပြောတတ်ဘူး။ ပန်းအိဖြူဟာ မတ်တတ်ရပ်နေတာမျိုးတောင် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်း ရှေ့ကိုင်းကျပြီး ဖင်ကုန်းပေးထားသလိုတောင် ဖြစ်နေပြီ။ သူ့တင်ပါးကလည်း အစွမ်းကုန်ကို တင်းကား တစ်ထွက်နေတာ။
အဲဒီဖင်ကြီးကို ဘယ်လက်နဲ့ ကိုင်တယ်။ ဖျစ်ညှစ်တယ်။ စောက်ပတ်ထဲ ထိုးကလိနေတဲ့ ညာလက်ခလယ်ကို ဆွဲထုတ်ပြီး ပန်းအိဖြူ စအိုပေါက်လေးထဲ ပြောင်းထည့်လိုက်တယ်။ “ အို့….အိ…..အာ့…..ဟင့်…” ဖင်ပေါက်ထဲ လက်ချောင်းထိုးထည့်လိုက်တော့ ပန်းအိဖြူရဲ့ ပါးစပ်က အသံလေးတွေ ပေါ်လာပြန်တယ်။ ကိုင်းကျနေတဲ့ ကိုယ်အထက်ပိုင်းက ခပ်မတ်မတ် ပြန်ဖြစ်လာတယ်။ ညာလက်ကလည်း နောက်ဘက်ကို လှမ်းလာတယ်။ ဖင်ကိုထိုးထည့်တာကို မကြိုက်လို့ ဆွဲထုတ်ပစ်ဖို့ လက်လှမ်းလာတာလားလို့ ထင်မိသေးတာ။ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့စအိုပေါက်လေးထဲကို ရုတ်တရက် လက်ချောင်း ထိုးထည့်လိုက်တာကြောင့် ကောင်မလေး တုန်ခါလွုပ်ရှားသွားလို့ လက်က အလိုလို လှမ်းလာတာပါ။ နောက်တော့ ကိုယ်က ရှေ့ ပြန်ကိုင်းကျသွားတယ်။ ကျွန်တော်က ဖင်ပေါက်တစ်လှည့်၊ စောက်ခေါင်းထဲ တစ်လှည့် ပြောင်းပြီး အပီကို ထိုးကလိပေးတယ်။ ပန်းအိဖြူဟာ ကျွန်တော်လုပ်သမျှ ငြင်းကို မငြင်းဘူး။ အပီကို ခံနေတာ။ ယုံနိုင်စရာတောင် မရှိဘူး။ လိုးရင်လည်း ရမယ်ဆိုတာ အကဲခတ်မိတာကြောင့် ကျွန်တော်က ဖင်ပေါက်နဲ့ စောက်ပတ်ကို လက်ခလယ်နဲ့ လိုးနေတာကို ရပ်လိုက်တယ်။ လက်ချောင်းအစား လီးချောင်း ထိုးသွင်းတော့မယ်လေ..။ ဘယ်နေရာမှာ လိုးရရင်ကောင်းမလဲလို့ အမြန် စဉ်းစားရတယ်။ လိုးရင် အိမ်ခန်းထဲက ခုတင်ဟာ အသင့်လျှော်ဆုံးနေရာ ဆိုတာကိုတော့ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် အိပ်ခန်းက အိမ်ပေါ်ထပ် ထပ်ခိုးအမိုပေါ်မှာ။ ပြီးတော့ အဲဒီအိပ်ခန်းကနေ အိမ်ဝင်းအဝင်ဝကို ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူး။ လိုးလို့ကောင်းနေတုန်း အိမ်ဝင်းထဲ တစ်ယောက်ယောက် ဝင်လာလို့က ရုတ်တရက် မမြင်နိုင်။ အမြန်ထပြေးရှောင်ပုန်းဖို့ ဆိုတာကလည်း (ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး ၊ ပန်းအိဖြူအတွက်ပြောတာပါ) အထပ်ခိုးပေါ်က ဆင်းရအုန်းမှာ ဘာညာနဲ့ အဆင်မပြေဘူး။ အိမ်ဝင်းထဲ လူဝင်လာရင်လည်း စောစောစီးစီး လှမ်းမြင်နိုင်အောင် ၊ ပန်းအိဖြူအနေနဲ့လည်း အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေပြေ ရှောင်သွားနိုင်အောင် နေရာကောင်းကို ရွေးရမှာ။ သိပ်အကြာကြီး တော့ မစဉ်းစားလိုက်ရပါဘူး။
ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ပန်းအိဖြူကို လိုးရမယ့်နေရာကောင်းကို စဉ်းစားမိတယ်။ အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းလေ…။ အဲဒီကနေဆိုရင် ဝင်းတံခါးကို တန်းမြင်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ပန်းအိဖြူတို့ အိမ်ဘက်ခြမ်းက ဧည့်ခန်းနဲ့ ခြားထားတဲ့ နံရံမှာ မလွယ်ပေါက်လို တံခါးသေးသေးလေးတစ်ခုကလည်း ရှိနေသေးတယ်။ အဲဒီတံခါးပေါက်အသေးလေးကို အသာချက်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် အရေးအကြောင်းဆို ပန်းအိဖြူ လဲ ဒီတံခါးကနေ သူတို့ အိမ်ခန်းဘက်ခြမ်းကို လှစ်ခနဲ ကူးပြေးသွားရုံပဲ။ “ လာ…. ပန်းအိ .. ဧည့်ခန်းထဲ သွားရအောင်…” ကောင်မလေး တင်ပါး တစ်ချက် အသာပုတ်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။ “ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဘာလုပ်အုံးမလို့လဲ….” ကောင်မလေးက မျက်စလေးချီကြည့်ပြီး ညုတုတုလေး ပြောတယ်။ “ ပန်းအိကို လိုးမလို့ပေါ့…” ပိုင်နေပြီဆိုတာ သိလို့ ကျွန်တော်ကလည်း တစ်တစ်ခွခွပဲ ပြောချလိုက်တယ်။ “ ဟာကွာ…. ဦးစိုးနော်….” ကောင်မလေးက မူနွဲ့နွဲ့လေး ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ခေါ်ရာနောက်ကိုတော့ လိုက်လာတယ်။ ကျွန်တော် ဆွဲချွတ်ချထားလို့ ဒူးဆစ်နားလောက်ကို လျှောကျနေတဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီက တုတ်ဆွဲထားသလို ဖြစ်နေတာကြောင့် ကောင်မလေး လမ်းလျှောက်ရတာ အဆင်မချောဘူး။ တုံ့နှေးနှေး ဖြစ်နေတယ်။ “ အောက်ခံဘောင်းဘီ ချွတ်ထားခဲ့ပါလား..” “ အို…..မချွတ်ဘူး…” “ ချွတ်ခဲ့ပါကွ… ပန်းအိကလည်း….” “ ဟင့်အင်း…ဟင့်အင်း…..” ပန်းအိဖြူက ပါးစပ်ကသာ ဟင့်အင်းပြောနေတာ …။ ကျွန်တော်က သူ့အောက်ခံဘောင်းဘီကို ဇိုးဇတ်ဆို ချွတ်ချလိုက်တော့ ဘာမှ မပြောဘူး။ ခြေထောက်တစ်ဘက်ကိုတောင် အလိုက်သင့် ကြွပေးပြီး ကူညီသေးတယ်။ “ ဘာမှန်းလည်း မသိဘူး… မချွတ်ပါနဲ့ ဆိုတာ အတင်းချွတ်တာပဲ…” နွုတ်ခမ်းလေး မစူတစူ၊ မျက်စောင်းလေး မချိတ်တချိတ်နဲ့ ပြောလိုက်သေးတယ်။ “ သူက ရွုတ်နေတာပဲဟာ… ချွတ်ပစ်ထားခဲ့မှပေါ့…” “ အို…..ဘာရွုပ်တာလဲ…ဟင့်…..” ကျွန်တော်က ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ဘူး။ အောက်ခံဘောင်းဘီလေးကလည်း ကျွတ်ထွက်သွားပြီလေ။ ချွတ်ယူလိုက်တဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီလေးကို ကြမ်းပြင်ပေါ် ပစ်ချတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ ဘယ်လက်မောင်းကို ညာလက်နဲ့ ခပ်တင်းတင်း ဆုတ်ကိုင်ပြီး ဧည့်ခန်းဆီကို ဆွဲခေါ်ထုတ်လာတယ်။ ပန်းအိဖြူဟာ ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ရာနောက်ကို အသာလေး လိုက်လာတယ်။ လိုက်လာတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ အပေါ်ဘက်က ဘလောက်အင်္ကျီ ကြယ်သီးအားလုံး ပြုတ်လို့..။ ဆူဖြိုးစ နို့အုံသားလေးနှစ်ခုဟာ အဖွေးသားနဲ့..။
အောက်ပိုင်းက စကပ်တိုတိုလေးဟာလည်း လျော့တိလျော့ရဲ ဖြစ်လို့..။ ကျွတ်မကျအောင် ပန်းအိဖြူက လက်ကလေးတစ်ဘက်နဲ့ ကိုင်ထိန်းထားရတယ်။ ချာတိတ်မရဲ့ ကိုယ်ပေါ်က ဘလောက်စ်နဲ့ စကပ်တိုလေးတို့ကို အချိန်မရွေး ဇတ်ခနဲ ချွတ်ပစ်နိုင်တာကို ကျွန်တော်နားလည်တယ်။ ငယ်ငယ်နုနု အပျိုပေါက်မလေးကို ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး အပီလိုးရတော့မှာမို့ ကျွန်တော့်ရင်တွေ အတော်ခုန်နေတာ။ ကျွန်တော့် ငပဲကြီးဟာလည်း ဘာတောင်သလဲ မမေးနဲ့ ။ မတ်နေတာပဲ။ မာနေတာပဲ။ လိုးချင်စိတ် ထန်နေလို့လား မပြောတတ်ဘူး။ ကောင်မလေးက ခေါ်ရာကို အသာလိုက်လာနေတာကိုတောင် ကျွန်တော်က ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ ဧည့်ခန်းထဲ ဆွဲခေါ်ထုတ်လာတယ်။ ကျွန်တော်က ပန်းအိဖြူကို သိုင်းဖက်လိုက်တယ်။ ကောင်မလေးကလည်း ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ အလိုက်သင့် တိုးဝင်လာတယ်။ သူလည်း အဖက်အပွေ့ခံချင်နေတာ သိသာလှပါတယ်။ ကျွန်တော်က နမ်းဖို့ အသာကိုင်းချလိုက်တော့ ပန်းအိဖြူကလည်း သူ့မျက်နှာလေးကို အလိုက်သင့် မော့ပေးရှာတယ်။ အစကတော့ ချာတိတ်မကို ပါးနမ်းမလို့ပါပဲ။ မော့ပေးလာတဲ့ မျက်နှာလေးပေါ်က နွုတ်ခမ်းပါးလေးတွေက နှင်းဆီဖူးလို စူစူရွရွလေး ဖြစ်နေတာ မြင်ရတော့ ပါးနမ်းမနေတော့ပဲ အဲဒီနွုတ်ခမ်းဖူးဖူးရွရွလေးကိုပဲ ကျွန်တော့်ပါးစပ်နဲ့ ဖိကပ်ငုံခဲလိုက်တယ်။ “ အင့်….အင်းအင်း……..အင့်…..” ကောင်မလေး ပါးစပ်က အသံလေးတွေ ပေါ်ထွက်တယ်။ ပါးစပ်ချင်း အပ်မိနေတာဆိုတော့ သူ့အသံလေးတွေ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ဝင်လာသလိုပဲ။ ပန်းအိဖြူရဲ့ နွုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေကို မျှင်းပြီး စုပ်နမ်းရင်း သူ့နို့တွေကို ဆွဲကိုင်ဆုတ်နယ်တယ်။ ဘလောက်စ်ရင်ဘတ် ကြယ်သီးအားလုံး ဖြုတ်ပြီး ဖွင့်ပေးထားတာမို့ ပကတိ နို့အုံသားတွေကို အားပါးတရ ကိုင်နယ်ရတာ အတော်လေးကို ဆူဆူဖြိုးဖြိုး ထွားထွားပြည့်ပြည့် ရှိနေပြီဆိုတာ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး ကျကျနန ကြည့်တော့မှ ပိုပီပီပြင်ပြင် တွေ့ရတယ်။ စောက်မွေးမပေါက်သေးလို့ ကတုံးပြောင်လေးဖြစ်နေတဲ့ စောက်ပတ်နုနုလေးကလည်း ဖောင်းဖောင်းအိအိနဲ့ လိုးချင်စရာ…..။ “ ဟို အပေါ်သွား…..” ကျွန်တော်က နှစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖာခုံကြီးကို မေးငေါ့ပြပြီး ပြောလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးဟာ ဘာတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောရှာဘူး။ ကျွန်တော်ပြောသလို လုပ်တယ်။ ဆိုဖာခုံကြီးပေါ် သွားထိုင်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေကို မြန်မြန်ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ… ၊ အလိုးခံမဲ့ ကောင်မလေးက ဗလာကျင်းနေတာဆိုတော့ တက်လိုးမယ့် ကျွန်တော်လည်း အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ရက်ကြီးဖြစ်နေလို့ ဘယ်သင့်တော်မှာလဲ။ ကောင်မလေးလိုပဲ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်နေမှပေါ့..။ ကျွန်တော်က စပို့ရှပ်နဲ့ ပုဆိုး ဝတ်ထားတာပါ..။ နှစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖာအစွန်မှာ တင်ပါးလေးတင်ပြီး အသာထိုင်ရင်း ခေါင်းလေးငုံ့ထားတယ်။
ကောင်မလေးဟာ စိတ်အရမ်းထ၊ စောက်ပတ်အရမ်းယားပြီး သိပ်ကို အလိုးခံချင်နေပေမယ့် အပျိုပေါက်စလေးဆိုတော့ ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်နေတဲ့ ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်ကို ရဲရဲ ကြည့်ဖို့ စိတ်မရဲသေးပဲ ရှက်ကြောက်နေပုံပါပဲ။ ကျွန်တော်ကလည်း အဝတ်တွေ အမြန်ချွတ်ချပြီးတာနဲ့ လီးကြီး အတောင်သားနဲ့ ပန်းအိဖြူရှိနေတဲ့ ဆိုဖာခုံကြီးဆီ သွားတယ်။ ခြေတစ်လှမ်းနှစ်လှမ်းလောက် လှမ်းပြီးမှ အပျိုစစ်စစ် ပါကင်ပိတ်လေးကို ပါကင်ဖွင့်ပြီး အပျိုရည်ဖျက်လိုးတဲ့အခါ အပျိုမှေးပါး စုတ်ပြတ်လို့ သွေးထွက်တာမျိုးတွေ ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်တာကို စဉ်းစားမိတယ်..။ ကောင်မလေးရော ကျွန်တော်ရော နှာထန်ရမ္မက်ပြင်းနေမှာမို့၊ အရည်တွေ အတော်ကို ထွက်မယ်ဆိုတာလည်း တွေးမိတယ်။ ကောင်မလေးကို တက်လိုးမဲ့ နှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖာခုံကြီးပေါ်မှာ ပေကုန်ရင် မကောင်းဘူး။ ပြဿနာတောင် တက်နိုင်တယ်လို့လည်း အထာပေါက်တယ်။ ဒါကြောင့် ချွတ်ချထားတဲ့ ကျွန်တော့်ပုဆိုးကို ပြန်ကောက်ယူရတယ်။ မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒီပုဆိုးခင်းပြီး လိုးရမှာပဲ။ ဆိုဖာခုံပေါ်မှာ ပုဆိုးကို အသာဖြန့်ခင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပန်းအိဖြူကို ပုဆိုးခင်းထားတဲ့ ဆိုဖာခုံပေါ် ပက်လက်လှန်အိပ်ရက်သားဖြစ်အောင် အသာဆွဲပြီး လှဲချတယ်။ ကောင်မလေးကလည်း ကျွန်တော်ဖက်လှဲသလို အလိုက်သင့်လေးပါလာပြီး ပက်လက်အိပ်ပေးတယ်။ “ ဦးစိုး…. ဘာ….ဘာ..ဘာလုပ်မလို့လဲဟင်” အသံတုန်တုန်လေးနဲ့ မေးရှာတယ်။ “ ပန်းအိကို လိုးမလို့ပေါ့ကွ…” ကျွန်တော်က ပြန်ဖြေတယ်။ ပေါင်ကြားက သူ့စောက်ပတ်လေးကိုလည်း ကိုင်ပြီး အသာပွတ်ပေးတယ်။ ကောင်မလေး လွုပ်လွုပ်ခါခါ ဖြစ်တယ်။ “ ကောင်းပါ့မလား ဦးစိုးရာ….” “ ကောင်းပါတယ်ကွ…၊ ပန်းအိလည်းကောင်း၊ ဦးလည်းကောင်း၊ နှစ်ယောက်စလုံး ကောင်းမှာပါ။ လိုးမယ်နော်….ဟုတ်လား…” “ ဟို…ဟို……ဗိုက်ကြီးမှာ ကြောက်တယ်…ဟင့်…” ငိုသံလေးပါလာတယ်..။ “ အဲဒါ စိတ်ချ…၊ ဗိုက်မကြီးစေရဘူး…၊ ဘာမှ ပူမနေနဲ့..” “ တကယ်လား …ဦးစိုးရာ…” “ တကယ်ပါ ပန်းအိရ..၊ ဗိုက်မကြီးအောင် လိုးတဲ့နည်းတွေ ဦးစိုး သိပါတယ်…” “ ဦးစိုးက ဘယ်လို သိတာလဲ…၊ ဘယ်သူ့ကိုများ ဗိုက်မကြီးအောင် လုပ်နေတာလဲ…ပြောစမ်း…” ပြဿနာပဲ..။ အခြားမိန်းမတွေကို ကျွန်တော်လိုးနေတဲ့အကြောင်း (အခုအချိန်မှာ) ဒီကောင်မလေးကို ပေးသိလို့ ဘယ်ဖြစ်မှာလဲ..။ အဆင်ပြေအောင် ကြံဖန်ပြောမှ…။ “ ဒီလိုပဲ…ဗီဒီယိုကားတွေကြည့်၊ဘာညာနဲ့ သိတာပေါ့…ပန်းအိလေးရ…” “ ဗီဒီယိုကားတွေထဲမှာ ဗိုက်မကြီးအောင် လုပ်တဲ့နည်း ပါလို့လား…” “ ပါတယ်…” “ သမီး ကြည့်ချင်တယ်…” “ ကြည့်ရမယ်…ကြည့်ရမယ်…အခုတော့ လိုးကြရအောင်နော်..၊ ဒူးနှစ်လုံးထောင်ပြီး ပေါင်လေးခပ်ကားကား လုပ်ပေးထား…၊ ဟုတ်ပြီ….လိမ္မာတယ်..” စိတ်တွေထနေတဲ့ ကောင်မလေးပဲ။
ဗိုက်မကြီးစေရပါဘူးလို့ အပြတ်အာမခံလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း အလိုးခံဘို့ အသင့်အနေအထား ပြင်ပေးပါလေရော…။ “ ဘာလိမ္မာတာလဲ… သူလုပ်ရမှာမို့လို့….ဟွန့်……” ဒူးလေးထောင်၊ ပေါင်တန်နှစ်ချောင်း ကားပေးရင်းက မျက်စောင်းလေး ချိတ်ပြီးတောင် ပြောလိုက်သေးတယ်။ ကျွန်တော်က ဘာမှပြန်မပြောပါဘူး။ ပြုံးဖြဲဖြဲ ရယ်ကျဲကျဲ လုပ်ပြီး ပန်းအိဖြူအပေါ် တက်ခွတယ်။ ကောင်မလေးက အလိုးခံဖို့ အသင့်ရှိနေပေမယ့် ကျွန်တော်က သူ့စောက်ပတ်ထဲ လီးကို တစ်ခါတည်း ထိုးမသွင်းသေးဘူး။ စောက်ပတ်အဝမှာ လီးတေ့ထောက်ပြီး အသာပွတ်ပေးတယ်။ နုနုထွတ်ထွတ် အပျိုမလေးရဲ့ ယင်ဖိုမှမသန်းဖူးသေးတဲ့ အပျိုစစ်စစ် စောက်ပတ်လေးမို့လား မသိဘူး။ အိအိဖြိုးဖြိုးလေးနဲ့ တေ့ထောက်မိနေတဲ့ လီးထိပ်ကတဆင့် ထူးခြားတဲ့ အတွေ့အရသာဟာ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖိန်းရှိန်းသွားအောင်ကို ပြန့်နှံ့လာတယ်။ အပျိုပေါက်မလေး ပန်းအိဖြူဟာလည်း သူ့စောက်ပတ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဦးဦးဖျားဖျားဆိုသလို လီးတေ့ကပ်ပွတ်ပေးတာ ခံရလို့ လူးလွန့်နေတာပါပဲ..။ “ အို….ဟင့် ဟင့်….. ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ ဦးစိုးရယ်… ကြည့်ပါလားလို့…ဟင့်ဟင့်ဟင့်….” “ ပန်းအိ စောက်စေ့က သိပ်မပြူးသေးဘူး…၊ ဒါကြောင့်စောက်စေ့ပြူးထွက်လာအောင် လီးနဲ့ တေ့ပွတ်ပေးနေတာ၊ လိုးတဲ့အခါမှာ စောက်ပတ်ဖောင်းတက်ပြီး စောက်စေ့ပြူးထွက်နေမှ ဖီလင်အပြည့်ရတာ…မှတ်ထားနော်…” “ ဟာ….ဟို…အို……..မသိဘူး…မသိဘူး…” “ မယားကလေးကလည်းကွာ… နားလည်အောင် သင်ပေးနေတာကို ..နားထောင်မှပေါ့..” “ သွား….ဘာမယားလေးလဲ…၊ သမီးနဲ့ ဦးစိုးက မင်္ဂလာဆောင်မှာမို့လို့လား..” “ မင်္ဂလာမဆောင်လည်း လိုးတော့မှာပဲဟာ၊ လိုးပြီးရင်တော့ လူများ သိသိမသိသိ၊ ပန်းအိက ဦးစိုးမယားလေး ဖြစ်သွားပြီပဲဟာ…” “ ဟာ…..ဦးစိုးနော်…. ရှက်စရာတွေ လျှောက်ပြောမနေနဲ့…ကွာ…” “ ဘာများ ရှက်စရာလိုတော့လို့လဲ..ပန်းအိရာ..၊ ကဲ ပြောကြည့်စမ်း…၊ သမီးစောက်ပတ်လေးထဲ ဦးစိုးရဲ့ လီးကြီး သွင်းပြီး လိုးပေးပါတော့ လို့…” “ ဟင့်အင်း..ဟင့်အင်း……မပြောရဲဘူး….” “ ဘာလဲ…အလိုး မခံချင်လို့လား….ပန်းအိက…” “ ဟာ…ရှက်တယ်…ဦးစိုးရ…ကျွတ်…….” “ ရှက်မနေပါနဲ့ လို့ ပြောပြီးပြီပဲ၊ ပန်းအိနဲ့ ဦးစိုး လိုးကြတော့မှာ…၊ ကိုယ့်ကို လိုးမယ့်လူကိုများ ရှက်နေရသေးလား ..ပြောလိုက်စမ်းပါ ..ပန်းအိရဲ့…” ကောင်မလေး စောက်ပတ်ကို လီးနဲ့ ပိုပြီးဖိပေးပွတ်ပေးလိုက်တယ်..။
အဖုတ်ဟာ ဖောင်းဖောင်းလာသလို အရည်ကြည်တွေဟာလည်း စိုစိုထွက်လာနေကြတာပဲ..။ “ ဟို…..ဟို…..သမီး….ဟို…ဟာ….ပြောလို့မထွက်ဘူးကွာ…အို…ဟင့်…ယားတယ်…ဦးစိုးရဲ့… လုပ်လေ..လုပ်တော့…..” ကောင်မလေး အရဲစွန့်ပြီး ကြိုးစားပြောချလာတယ်။ ဒီထက် တစ်တစ်ခွခွပြောပြီး၊ ဒီထက် ပိုစိတ်ထလာအောင် ကျွန်တော်က ထပ်ရစ်တယ်။ စောက်ပတ်ကို အသာဖြဲပြီး၊ အာတာတာ ပြဲတဲတဲဖြစ်လာတဲ့ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက် လီးဒစ်ထိပ်နဲ့ အထက်အောက် (ထယ်ထိုးသလိုမျိုး) ပြန်လှန်ထိုးပွတ်တယ်။ “ အို အို….. ဟင့်..ဦးစိုးရာ………..အမေ့…ဟင့်…” “ပြောလေကွာ….ဦးစိုးပြောခိုင်းထားသလိုမျိုး…ပြောလိုက်စမ်းပါကွ….” “ ဟင့်ဟင့်….သမီးကို လိုးပါတော့ ဦးစိုးရ၊ ဦးစိုးရဲ့ လီးကြီး ထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့ ..ဟင့်ဟင့်…..လိုးလေ… တက်လိုးစမ်းပါ ရှင့်….” စိတ်အရမ်းထလာအောင် ဆွပေးလိုက်တော့ ကောင်မလေး မနေနိုင်တော့ဘူး။ ပါးစပ်က ထုတ်ပြောလာတယ်။ တစ်တစ်ခွခွ စကားလုံးတွေ ထုတ်ပြောလိုက်ရတာကြောင့် အရမ်းတော့ ရှက်သွားရှာမှာပဲ။ ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ထားတဲ့ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးတောင် ပန်းနုရောင်သန်းသွားတာ မြင်လိုက်ရတယ်။ ရှက်စိတ်ကြောင့် မျက်နှာနီရုံတင်မကဘူး၊ တစ်ကိုယ်လုံး နီရဲသွားတာ..။ “ ဟုတ်ပြီ…ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်ပြီးတာပဲ၊ ကဲ….လိုးတော့မယ်…ပေါင်ကားပေးထား…” “ ကားပေးထားတာပဲ ဦးစိုးရဲ့…. ဟင့်…” “ ဒီထက် ပိုကားလိုက်… ဟုတ်ပြီ… ” ကျွန်တော်က လီးကို အသာဖိထိုးပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆိုသလိုပဲ ဖိဆောင့်သွင်းချလိုက်တယ်။ သူ့စောက်ပတ်ထဲ ဝင်အောင်မသွင်းသေးပါဘူး။ ဘေးချော်ထိုးပစ်လိုက်တာ။ ချော်ထိုးတယ်ဆိုတာမှာ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းအတိုင်း ဒစ်ကြီးနဲ့ ထိုးကလော်တင်သလိုဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်တာ။ စောက်စေ့ကိုလည်း ထိမိသွားတာပေါ့။ အပျိုမလေး စိတ်ပိုထလာအောင် ဖန်လိုက်တာလေ။ “ အိုး…မားမား…ဟာ ဘေးချော်ထွက်သွားပြီ… ၊ အရမ်းကြီး ဖိထိုးချလိုက်တာကိုး….” အရမ်းကို အလိုးခံချင်လို့ လီးကို တမ်းတနေတဲ့ ကောင်မလေး လီးက သူ့စောက်ပတ်ထဲ မဝင်ဘဲ ဘေးချော်ထွက်သွားတော့ အားမလိုအားမရ ပြောတယ်။ ဒီအပြောလေးက ကျွန်တော့်နားထဲမှာ ချိုဆိမ့်သွားတာပဲ..။ “ ဟုတ်ပ… ကဲ စောက်ပတ်အပေါက်ဝမှာ တည့်အောင် ဆွဲတေ့ပေးပါလား…” “ အိုး…. တေ့မပေးနိုင်ပါဘူး…. ကျွတ်…တကယ် ရစ်တာပဲ…” “ ရစ်တာမဟုတ်ပါဘူး..၊ ပန်းအိရဲ့….၊ ဆွဲတေ့မပေးရင် ဒီလိုပဲ ဘေးချော်ထွက်နေမှာပေါ့…..၊ လုပ်ပါကွာ…. တေ့ပေးစမ်းပါ ပန်းအိက လိမ္မာသားနဲ့…” “ ဟွန့်….. လာပြန်ပြီ…. ဘာလိမ္မာတာလည်း….၊ မပြောချင်ဘူး…. ..၊ ကဲ….ပေးပေး….” ကောင်မလေး ရဲမယ့်ရဲတော့လည်း အပီဘဲ။
ကျွန်တော့် ငပဲချောင်းကြီးကို အလယ်လောက်ကနေ ညာဘက်လက်နဲ့ ဇတ်ဆို ဆွဲကိုင်ပြီး သူ့စောက်ပတ်ဝမှာ တေ့ပေးလိုက်တယ်။ “ ကဲ….. တေ့ပေးထားပြီ…. သွင်းလေ….” တေ့ပေးတာနဲ့ ချက်ချင်း ဖိထိုးမသွင်းသေးလို့ ကောင်မလေး မကျေနပ်သလို ပြောလိုက်သေးတယ်။ “ အော်….. အေးအေး…. သွင်းပြီ….” ကျွန်တော်က အသာလေး ဖိချလိုက်တယ်။ စောက်ပတ်ဝမှာ ပန်းအိဖြူကိုယ်တိုင်က သေသေချာချာ ဆွဲတေ့ကပ်ပေးထားတာဆိုတော့၊ အသာဖိထိုးချလိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော့် လီးဒစ်ထိပ်ဖူးပိုင်း တစ်လက်မသာသာလောက် ကောင်မလေးရဲ့ စောက်ခေါင်းပေါက်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ ဝင်သွားတယ်။ အော်…. စကားသင့်လို့ ပြောထားရအုန်းမယ်..။ ကျွန်တော့်လီးက (၁၀) လက်မလောက် ရှည်ပြီး ကျပ်လုံးလောက် တုတ်တာ။ ဒစ်ကြီးက သုံးလက်မလောက် ရှိတယ်။ လီးထိပ်အရေပြားကို ဖြတ်မထားဘူး..။ ဒါပေမယ့် လီး အပြတ်တောင်နေတဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့ အရေပြားက ဒစ်တစ်ခုလုံးကို မဖုံးဘူး..။ လီးဒစ်ထိပ်ဖျားပိုင်းမှာ လက်မဝက် မရှိတရှိလောက် ပေါ်နေတယ်။ ပန်းအိဖြူ စောက်ပတ်ထဲ လီးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်က လီးထိပ်က အရေပြားကို အောက်ဆွဲချပြီး ဒစ်ဖော်မထားဘူး။ ဒီတော့ လီးဒစ်ထိပ်ဖူးမှာ ငါးမူးပြား ဝိုင်းလောက်ပဲ အရေပြား အာတာတာလေး ဖြစ်နေတာ။ ပန်းအိဖြူက အသက်ငယ်ငယ် အပျိုပေါက်မလေး..။ သူ့စောက်ပတ်ကလည်း ပါကင်ပိတ်..။ ကျဉ်းကျဉ်းကလေး..။ ဒီစောက်ပတ်ကျဉ်းကျဉ်းကလေးထဲကို ကျွန်တော့် လီးဒစ်ကြီးရဲ့ ထိပ်ပိုင်း တစ်လက်မလောက် ဝင်သွားတာဟာ တင်းကြပ်ပြည့်သိပ်နေတာပဲ..။ လီးဒစ်မှာ ဖုံးအုပ်နေတဲ့ အရေပြားကတော့ ဒစ်ထိပ်ဖူးနဲ့အတူတူ စောက်ခေါင်းပေါက်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ လိုက်ဝင်မသွားဘူး.. ။ တစ်ခံပြီး လိပ်ကျန်နေခဲ့တာ..။ စောက်ပတ်လေးထဲကို ဝင်သွားလေပြီဖြစ်တဲ့ လီးဒစ်ထိပ်ဖူး တစ်လက်မသာသာရဲ့ အောက်ဘက်နားမှာ ရစ်ပြီး ဖုထစ်ထစ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအရေပြားအလိပ်အရစ်က ပန်းအိဖြူရဲ့ စောက်ခေါင်းပေါက်အဝကို ပိပိရိရိ ကိုထိမိ ဖိမိနေတာ..။ လီးဒစ်ထိပ်ဖူးပိုင်း တစ်လက်မလောက် ထိုးသွင်းထားတာမို့ ပန်းအိဖြူရဲ့ အပျိုစစ်စစ် စောက်ခေါင်းပေါက်ဝကျဉ်းကျဉ်းလေးဟာ တင်းပြောင်နေတာ။ ကျွန်တော့်လီးဒစ်ထိပ်ပိုင်းကို သားရေကွင်း အသစ်စက်စက်နဲ့ ခပ်တင်းတင်း ပတ်ချည်ထားသလိုပဲ..။ ပြီးတော့ တင်းပြောင်တစ်နေတဲ့ စောက်ခေါင်းပေါက်ဝနဲ့ ဖုတုတု ထစ်တစ်တစ်ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လီးထိပ်အရေပြားတို့ ထိမိနေတဲ့ အတွေ့ကလည်း အတော်ကို ထူးတယ်ဗျာ..။
ကျွန်တော်ဟာ လက်မထပ်ရသေးပေမယ့် မိန်းမတော့ လိုးဖူးပါတယ်။ လိုးဖူးတာမှ တစ်ခါနှစ်ခါလောက်သာ မဟုတ်ဘူး..။ ကျွန်တော့် အဆက်ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းမတွေနဲ့ အကြံအဖန် ဖြစ်တိုင်း မကြာခဏဆိုသလို လိုးနေဆော်နေတာဆိုတော့ မိန်းမစောက်ပတ်ထဲ ကျွန်တော့်လီး ထိုးသွင်းရတာ ကျွန်တော့်အဖို့ အထူးအဆန် မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုပါတော့..။ ဒါပေမယ့် ပန်းအိဖြူလို အပျိုဖြစ်ကာစ ၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ချာတိတ်မလေးမျိုးကိုတော့ အရင်က မလိုးဖူးသေးဘူး..။ အခု ပန်းအိဖြူဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ပထမဆုံး လိုးရတဲ့ အပျိုပေါက် ချာတိတ်မလေးပဲ..။ အပျိုးဖြစ်ကာစ မိန်းမငယ်လေးရဲ့ ကျဉ်းကြပ်တဲ့ အဖုတ်ထိတွေ့မွုကတော့ လက်ဖျားခါရလောက်အောင်ကို ထူးကဲပါတယ် ဗျာ..။ ဒစ်က ထိပ်ဖူးပိုင်း တစ်လက်မသာသာလောက်ပဲ ဝင်ပြီး တစ်နေတာမို့ ကျွန်တော်က အသာပဲ ထပ်ဖိထိုးသွင်းလိုက်တယ်.။ သုံးလက်မသာသာလောက်ရှိတဲ့ ဒစ်ကြီး တစ်ခုလုံး စောက်ပတ်လေးထဲ မြုပ်ဝင်သွားရော…..။ လီးထိပ်ဒစ်ကို ဖုံးနေတဲ့ အရေပြားကတော့ လှန်ချသလိုဖြစ်ပြီး ၊ ဒစ်အရင်းပိုင်းနားကိုလိပ်ကျလာတယ်..။ ဒစ်အရင်းပိုင်းမှာ ဖုတစ်ထစ်လေး ဖြစ်သွားတာပေါ့..။ “ အား…ကျွတ်ကျွတ်….. ဝင်လာပြီ ဦးစိုးရဲ့…၊ ဟင့်ဟင့်….. ဝင်လာပြီ…” “ ဘယ်လိုနေလဲ ပန်းအိ..၊ စောက်ပတ်ထဲမှာ နာနေလား… ၊ ကြပ်နေလား…” “ တစ်မျိုးကြီးပဲ ဦးရ…. နာတာတော့ မဟုတ်ဘူး…၊ ဟိုလေ…. တစ်ဆို့ဆို့နဲ့ ကြပ်တပ်တပ်ကြီး ဖြစ်နေတာ ၊ အောင့်လည်း အောင့်သလိုပဲ…” “ ကောင်းရော ကောင်းရဲ့လား…” “ အင်း… ကောင်းတယ်….၊ ဦးစိုးက တကယ်ဆိုးတာပဲ…” “ ဘာဆိုးတာလဲ.. ပန်းအိရဲ့… လိုးနေတာပါ..ဟဲဟဲ…” “ သွား… တကယ် အပြော ပက်စက်တယ်…” “ အော်… ပန်းအိကလဲ… အခုလိုးနေတာမို့ လိုးတယ် ပြောတာ……..” “ တော်စမ်းပါ..၊ ဒီစကား နားရှက်စရာကြီး ၊ မပြောနဲ့… ဟွန်း…” “ အလိုးခံရတာ ကောင်းတယ်နော်…” “ သွား…. မသိဘူး… လာမမေးနဲ့ ဟင့်…” ကျွန်တော်က သူ့နို့သီးခေါင်းလေးနှစ်ခုကို စုံကိုင်ပြီး ခပ်ညှစ်ညှစ်လေး ဆွဲရင်း ဆက်ဖိထိုးသွင်းလိုက်တာ၊ နောက်ထပ် လီး နှစ်လက်မလောက် စောက်ပတ်ထဲ ထပ်ဝင်တယ်။ “ ဗျစ်…. ဘုဘု….ဗျစ်….” လီးဝင်သွားသံ မတိုးမကျယ် ပေါ်ထွက်တယ်။ “ အား….အီး….အီး…. နာတယ်…နာတယ်….အ….အခုမှ တကယ်နာတာ ဦးစိုးရ… အားအား….” လီးကြီးက တစ်ဝက်နီးပါး ဝင်ပြီး၊ သူ့စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲက အပျိုမှေးပါးကိုလည်း ထိုးမိထောက်မိသွားတာကြောင့် ကောင်မလေး ရွုံ့မဲ့ညည်းညူတယ်။
ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကို တွန်းထားတာကလည်း ပိုအားများလာတယ်။ အခု ငယ်ငယ်နုနု အပျုိုပေါက်မလေးရဲ့ အပျိုအမှေးပါးကို လီးနဲ့ ထိမိထောက်မိသွားတာကြောင့် စိတ်အရမ်းထလာတယ်..။ ဒီအမှေးပါးကို ထိုးဖောက်ပြီး အပျိုရည်ဖျက် ပါကင်ဖွင့်ပစ်ချင်တဲ့ ဇောတွေ ဟုန်းခနဲကို ထထာလာတာပဲ..။ ဒါကြောင့် လီးတစ်ဝက်လောက် ထိုးသွင်းလိုက်တဲ့ ဒဏ်ကြောင့် ကောင်မလေး နာနာကျင်ကျင် ဖြစ်ပြီး ရွုံ့မဲ့ညည်းတွားနေပေမယ့် မညှာတာနိုင်တော့ပဲ အားထည့်ပြီး ဆက်ဖိဆောင့် ဆောင့်ထိုးသွင်းလိုက်မိပါတယ်။ ရက်တော့ ရက်စက်ရာ ကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုးချင်တဲ့ ဇောကလည်း သိပ်ထန်နေတာကိုး..။ “ အောင်မလေး…လေး… သေပါပြီ ဦးစိုးရ…၊ နာလိုက်တာ… နာတယ်..နာတယ်…အား.. မရဘူးထင်တယ်..ဦးစိုးရဲ့ ..ဆက်သွင်းလို့ မရဘူး..၊ အရမ်းနာနေတယ်… မလုပ်နဲ့ ဖယ်..ဖယ်… အား အား…” ပန်းအိဖြူသည် ငြင်းဆန်နေပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ လီးကို ဆက်သွင်းနေပါတယ်။ အခုအနေအထားမှာ လီးအဆုံးဝင်အောင် ထိုးသွင်းပြီး အပီလိုးပေးမှသာ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိတယ်။ ဒါမှ ကောင်မလေးလည်း အလိုးခံရတဲ့ ဖီလင်အပြည့်အဝရပြီး အရသာကောင်းကောင်း တွေ့မှာ..။ အလိုးခံရတာကို သဘောကျစွဲမက်ပြီး နောက်နောင်ကိုလည်း ထပ်လိုးဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရမှာ မဟုတ်လား..။ အခုမှ လီးပြန်ထုတ်လိုက်လို့ကတော့ ပန်းအိဖြူအနေနဲ့ အရသာ မခံစားရတော့ပဲ ၊ နာတာကိုပဲ သိပြီး အလိုးခံရမှာကို လန့်ဖြန့်ကြောက်ရွံ့သွားလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဆက်ဖိထိုးသွင်းတာ..။ အပျိုအမှေးပါး စုတ်ပြတ် ပေါက်သွားပြီး အပေါ်က အပီခွထိုးထည့်တာဆိုတော့ ကောင်မလေး ရုန်းကန်နေပေမယ့် လီးကတော့ ဝင်ပါတယ်။ ရုန်းကန်နေတာကလည်း လီးပိုဝင်အောင် ထိုးသွင်းဖို့ ကူညီပေးနေသလို ဖြစ်နေတာကိုး..။ “ အား..အား…နာတယ်… သေပြီး ဦးစိုးရယ်…၊ သမီးကို အသေသတ်နေတာလား..နာလှချည့်ရဲ့…၊ တော်ပါတော့..အားအား….ပြောလို့လည်း မရဘူး..၊ သွင်းနေတာပဲ..အား……အား……..” “ ခဏပဲ နာမှာပါ ပန်းအိရာ…၊ ခဏလေးပါ..၊ ဟောကြည့်..လီးအကုန်ဝင်သွားပါပြီ… မကြာခင် ကောင်လာတော့မှာ..” “ အိုး…. ဘာကောင်းမှာလဲ…၊ ဦးစိုး…အရမ်းထိုးတယ်ကွာ… သိပ်နာတာပဲ..၊ ကျွတ်..ကျွတ်…. ဟင့်..ဟင့်..ဟင့်….” ကျွန်တော်ကလည်း လီးတစ်ဝက်သာသာလောက်ဆွဲထုတ်လိုက်၊ အသာဆတ်ခနဲ ပြန်ဖိသွင်းလိုက် လုပ်ပေးတယ်..။
ပြီးတော့ သူ့ပါးလေးတစ်ဘက်ကို နှာခေါင်းမြှပ်ဝင်သွားအောင် ဖိနမ်းပြီး ပေးလိုက်တယ်..။ “ ဘယ်လိုလဲ… အလိုးခံရတာ ကောင်းလာပြီ မဟုတ်လား..” “ ဟာ…မသိဘူး…၊ ဘွပ်…. အာ့…အ..အာ….ဟာ့…ဖြည်းဖြည်း…ဦးစိုးရယ်… အရမ်းကြီး မဖိပါနဲ့… ဟင့်….” “ ဒါ ဖိတာမဟုတ်ဘူး…ပန်းအိရဲ့..၊ ဆောင့်လိုးတာ….” “ သွား သွား…. ဦးကလဲ ပြောပြန်ပြီ….” “ ဘွပ်….ဘွပ်….ဘွပ်……” သုံးချက် ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ပေးလိုက်တယ်..။ “ အား….မားမား…. ဟင့်… နာတယ် ဦးစိုးရ..ဖြည်းဖြည်းလို့ ပြောနေတာ မရဘူး…၊ ဘွပ်… အိုး….ကြည့်ပါလား….” “ ပန်းအိကို လိုးရတာ ကောင်းလွန်းလို့ပါကွာ…၊ ဆောင့်လိုးပါရစေနော်….” “ အို…မသိဘူး….. ဘွပ်..ဘွပ်…. အိုး…ဟင့်….ဘွပ်……အင့်…” “ ဆောင့်မယ်နော်…. ပန်းအိ…” “ အိုး..ဟင့်….သဘောပဲ ..သဘောပဲ…..” “ ဒါမှ … ပန်းအိ ကွ……..” လိုးနေရင်းလည်း ကောင်မလေးနဲ့ စကားအချီအချ ပြောသေးတယ်။ ဒါက ပန်းအိဖြူ သိပ်ဖီလင်တက်ပြီး စွဲစွဲမက်မက် ဖြစ်အောင်လုပ်တာ..။ “ ဘွပ်…စွပ်…ပြွတ်….ဖုတ်…ဖတ်… ဘယ်လိုလဲ..ပန်းအိ စောက်ပတ်ထဲက နာသေးလား….” “ ဟင့်အင်း…မနာတော့ဘူး…” “ ကောင်းလား….” “ အင်း………ကောင်းတယ်…” “ ဦးရဲ့ လီးကြီးကို ပန်းအိ စောက်ပတ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်ရမလား ဟင်…” “ အိုး……..ဦးစိုးနော်… တကယ်ပဲ….” “ ထုတ်လိုက်ရမှာလား လို့… ပြောစမ်းပါအုန်း……” “ ဘာလို့ ထုတ်ရမှာလဲ…လုပ်နေတာ ဆက်လုပ်ပေါ့….လို့….” “ စောစောတုန်းကတော့ ပြန်ထုတ်လိုက်ပါ ဆို…….” “ အဲဒီတုန်းက အရမ်းနာတာကိုး…. ပြန်ထုတ်လို့ ပြောမိတာပေါ့….” “ အခုတော့ ကော……..” “ ဟာကွာ… ဦးစိုးကလဲ ဘာတွေ လာမေးနေမှန်း မသိပါဘူး..၊ လုပ်မှာ လုပ်စမ်းပါ… ၊ ဟင့်ဟင့်….” “ လိုးပေးနေတာ ခံလို့ကောင်းလာပြီ မဟုတ်လား….” “ အင်း…ကောင်းတယ်… ဆောင့်စမ်းပါ…ဦးစိုးရ ..ကောင်းတယ်…၊ အ..အား..အား….တအား တအား .ဟုတ်ပြီ….ဆောင့် ဆောင့်…….” အငမ်းမရ ပြောလာတယ်..။ အလိုးခံနေတဲ့ ချာတိတ်မက တအားဆောင့်လိုးခိုင်းလာနေတော့ ကျွန်တော်လည်း ချိုမထား၊ ထိန်းမထားနိုင်တော့ဘူး..။ အားကုန် သုံးကာ ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်တယ်..။ ပန်းအိဖြူကတော့ တကယ်ပဲ..။
အပီဆောင့်လိုးတာကို လုံးဝမဖြုံဘူး။ အားပါးတရကို ခံတာ..။ မိန်းမများ နှာထလာရင် ဘယ်လောက်ကြမ်းကြမ်း ၊ ခံတယ်ဆိုတာ တကယ်ပါပဲလား…။ “ ဘွပ်….ဘုဘု…ဘွပ်…. အား..အိအိ…. ကောင်းလိုက်တာ..ဦးစိုး လိုးတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ…၊ ဆောင့်… အား…အား…….သဘောရှိ စိတ်ကြိုက်လိုးနော်…အား…ကောင်းတယ်.. ဦးစိုးရာ..၊ သမီးစောက်ပတ်ထဲမှာ အီစိမ့်သွားတာပဲ..၊ အဲဒီလို မျိုး ဆောင့်ပေးစမ်းပါ..” ပန်းအိဖြူကလည်း အငမ်းမရ စကားတွေ တတွတ်တွတ် ပြောနေတယ်။ ဖင်ကော့ပင့် လွုပ်ခါပေးတာကလည်း အပီပဲ..။ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လိုလုပ်ထိန်းနိုင်တော့မှာလည်း..။ အပြတ်ကို လိုးဆောင့်ပစ်လိုက်တာပေါ့..။ ကျွန်တော့် ဂွေးဥထဲက သုတ်ရည်တွေ ထွက်ချင်လွန်းလို့ ဆူဝေလာတာကို ကျွန်တော် ခံစားသိနေရတယ်။ သုတ်ရည်တွေ ထွက်ချင်လာပြီလေ..။ သုတ်လွတ်ဖို့ နီးလာတာမို့ ကျွန်တော့် ဆောင့်လိုးချက်တွေကလည်း အားအပြတ်ကို ပိုပြင်းလာတယ်လေ။ တဘွပ်ဘွပ် လီးဝင်သံတွေ သောသောညံနေတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ချက် ရှိသမျှ အားအကုန်ထည့်သုံးပြီး တအားကုန် ဆောင့်ချလိုက်တယ်။ ပန်းအိဖြူဆိုတာ အိ ..ခနဲ ကို အသံထွက်ပြီး ကော့ပျံတက်သွားတာပဲ။ သူ့စောက်ပတ်ထဲက တအားဆောင့်ချလိုက်လို့ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ အဆုံးဝင်သွားတဲ့ ကျွန်တော့်လီးဟာလည်း ဆတ်ခနဲ လွုပ်တယ်။ ပြီးတော့ လီးထိပ်က သုတ်ရည်တွေဆိုတာ ပျစ်ခနဲ ပျစ်ခနဲကို ပန်းထွက်ကုန်တာပဲ။ ကျွန်တော်က လီးကို ချာတိတ်မရဲ့ စောက်ပတ်ထဲ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဝင်နိုင်သမျှ ဝင်အောင် ဖိကပ် ထိုးထည့်ထားတယ်။ ပန်းအိဖြူဟာလည်း တအီးအီး တအားအား အော်ဟစ်မြည်တမ်းရင်း တွန့်လိမ်ကော့ပျံလို့ နေတာပဲ။ ကောင်မလေး ဘယ်နှစ်ချီ ပြီးသွားမှန်းတောင် ကျွန်တော် မသိတော့ဘူး။ ငါးကြိမ်းထက်တော့ နည်းမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်ကို ဖက်ထားလိုက်တာကလည်း တင်းကြပ်လို့…. ပြီးပါပြီ….။